I-atherosclerosis yemikhawulo ephansi - incazelo ephelele yesifo nezindlela zokwelashwa > Isifo sikashukela
I-atherosulinosis yemikhawulo ephansi: ikhodi ye-ICD-10, izimbangela, izimpawu, izindlela zokuxilonga nezindlela zokwelapha
I-Atherossteosis yisifo se-polyetiological esithinta udonga lwe-vascular futhi singazibonakalisa ezindaweni ezahlukahlukene ngezigaba ezahlukene.
Sizohlaziya enye yezindlela ezivame kakhulu ze-pathology - isifo sokuqina kwemithambo yegazi emithanjeni engezansi - sizokhuluma ngezimpawu nokwelashwa kwaso, ukuthi kuyingozi yiphi nokuthi kungavinjelwa kanjani.
I-atherosclerosis yamaphethelo aphansi yisifo lapho kuthinteka khona i-endothelium (i-lining yangaphakathi) yemithambo yemilenze. Lokhu kungenxa yokungalingani ku-lipid metabolism. Isizathu esiyinhloko zombili i-atherosulinosis ze-aorta nemithambo yemilenze - inkomba ephikelelayo nengapheliyo ye-cholesterol embi egazini. Ngokusho kwesigaba samazwe omhlaba, i-atherosulinosis yemithambo yomlenze inekhodi ye-ICD ye-10: 170.2.
Lesi sifo sizibonakalisa ikakhulu lapho sesikhulile futhi sineminyaka yobudala, kepha izimpawu zaso zaselabhoratri zingatholakala ngaphambili. I-Atherossteosis ingakhula emzimbeni amashumi eminyaka kepha ingakhombisi zimpawu. Imithambo eyinhloko ivame ukuthinteka kakhulu. Kancane kancane, i-lumen yomkhumbi ivalwa ngama-cholesterol plaque, bese i-atherosclerosis ithatha ifomu lodonga-i-occlusal. Yini ekhethekile ngaye? Kulesi simo somtholampilo, amaseli we-sclerotic axutshaniswe ne-lipids agubungela ukukhanyiswa kwemithambo engaphezulu kwengxenye.
Ngokuhambisana nalokhu, izinqubo ezonakalisayo zenzeka ezingxenyeni ze-circillary zesistimu yokujikeleza kwegazi. Ngenxa yokuvela kwemithambo emincane ebambisene, i-trophism yezinyawo namajoyinti iyaphazamiseka, bese kuba nesithombe sasemitholampilo salesi sifo.
Izigaba zokuthuthuka nezimpawu
Ukunakwa kwempilo kanye nendlela yokuphila kuyasiza ekwandeni kwalesi sifo semilenze. Izimpawu ezibucayi kakhulu, izinkinga ezisongela impilo ziyavela, ukugxila okusha kwezilonda ezibangelwa ukuqina kwemizwa kungavela. Ochwepheshe bahlukanisa izigaba eziningana ze-atherosclerosis yemilenze:
Isigaba sokugcina. Ngalesi sikhathi, ngokusobala azikho izimpawu zesifo okwamanje. Kepha sekuvele kunokuqhekeka kokusebenza kwe-lipid futhi inqubo isiqalile. Izici ze-Trigger zidlala indima ebaluleke kakhulu kulesi sigaba - ukukhuluphala ngokweqile, ukungondleki ngokudla okunamafutha ngokweqile, ukungasebenzi ngokomzimba, ukuguga, nezifo ezihambelanayo. Bonke bayasheshisa inkambo yesifo. Kutholwe kuphela elabhorethri - ekuhlaziyeni kukhona ukwanda kwenani eliphelele le-cholesterol nezakhi zalo "ezimbi" - i-LDL ne-VLDL. Ngokuhambisana ne-cholesterol, ama-triglycerides nawo ayakhuphuka.
Isigaba sokuqala. Ngalesi sikhathi, inqubo ye-sclerosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi isivele isebenza, kepha isithombe sasemtholampilo asikavezwa kahle. Izimpawu azikho, zingenzeka kuphela ngokugcwala ngokweqile, ukuhamba isikhathi eside noma ukugijima, futhi ngokuvamile akuhehi ukunakwa okufanele.
Isigaba sesibili. Lapha sekuvele kunzima ukuthi ungaboni izibonakaliso ze-atherossteosis. Ukwanda kwezimpawu kuyanda, Ubuhlungu emilenzeni ethintekile kungadala ngisho nemidlalo emincane nokuzivocavoca komzimba. Ibanga lokuhamba elihamba phambili lesifo sezinhlungu ngamamitha angama-250. Kulesi sigaba, ukulandelana kwenqubo kungenzeka. I-Chronic Lower Isimbia yaqala - I-HINC - 2A isigaba se-atherosclerosis.
Isigaba sesithathu. Imithwalo emifushane nephansi idonsa ukungakhululeki nobuhlungu. Uhla lokuhamba olungenazhlungu lincishiswa lube ngamamitha angama-50.
Isigaba sesine ukuphazamiseka okuyizwi lokuphamba. Kutholakala nasezincwadini ngaphansi kwegama elithi “ukuphela”. Lesi yisigaba esinzima kakhulu salesi sifo.Ngenxa yokwephulwa okuphelele kokuqothuka kwemithambo kanye nemithambo yegazi emilenzeni, izilonda zamathambo ezingabonakali ziyabonakala emilenzeni, isikhumba sibe mnyama, izindawo ezingamakhompiyutha (izingcezwana zezicubu ze-necrosis) ziyavela, kanti nokuhlinzekwa kwemisipha nezicubu ezinomoya-mpilo kuyaphazamiseka. Ngaphandle kokwelashwa okuphuthumayo, lezi zinqubo zingangena ebulilini.
Ngaphandle kokuba khona kwesigaba esinde se-asymptomatic, lapho isiguli singakhombisi noma yiziphi izikhalazo, lesi sifo singabonakala esigabeni sokuqala futhi siselaphe. Ngokukhula kwama-atherosselotic plaque ezindongeni ze-vascular, isithombe somtholampilo siyanda futhi. Imvamisa izimpawu zokuqala - Lokhu kungugqinsi kwesikhumba sezinyawo, umuzwa we-goosebumps kanye nomuzwa wokuxwaya, umuzwa wokusinda emilenzeni.
Ukulandela lokhu, ngenxa ye-stenosis nokuncipha kokuqina kwemithambo, ukudonswa kwemithambo emaqakaleni, emaqakaleni nasefossa ye-popliteal kuncishisiwe. Isibonakaliso esibaluleke kakhulu kubuhlungu obukhulu ngesikhathi sokuzivocavoca - ukuvela lapho uhamba. Kunguhlobo, ubude besikhathi kanye nokwenziwa kwendawo yobuhlungu okunquma ukuthi inqubo yokubhubhisa ihambile kangakanani.
Ukubonakaliswa kwe-atherosclerotic kwabesifazane nabesilisa kuyafana, ngaphandle kokuthi engxenyeni eqinile yabantu, ukubonakaliswa kokugula kwenzeka eminyakeni yangaphambilini. Iminyaka yobungozi obukhulayo kwabesilisa ingaphezu kweminyaka engama-40-45 ubudala, kwabesifazane - ngaphezulu kweminyaka engama-50-55.
Ukuxilongwa: ukuthi ungabheka kanjani izitsha zemilenze ye-atherosulinosis
Kuze kube ukubonakaliswa kokuqala okungathi sína kwe-atherosulinosis yemithambo yemikhawulo engezansi, isigaba sokuhlungela i-asymptomatic sihlala isikhathi eside ngokwanele. Kuyo, lesi sifo sesivele sitholakele elabhorethri futhi siyasebenza. Futhi njengoba wazi, ukutholwa kokuqala kwezimpawu ze-atherosclerosis kuyisihluthulelo sokwelashwa kwayo okuphumelelayo. Cabanga ngezinto zesimanje kakhulu nezisebenzayo izindlela zokuxilonga nenhloso yabo. Lokhu kufaka phakathi:
I-Magnetic resonance angiography yemikhawulo ephansi.
I-peripheral and collaral arteriography.
Ukubalwa kwengcindezi ne-ankle-brachial index.
I-Palpation kanye nokulalela ukudonswa kwemithambo yemilenze.
Ukubonana nodokotela onguchwepheshe - udokotela ohlinza ngemithambo.
Izimbangela ze-pathology neqembu lengozi
Izici ezibalulekile ekwakhiweni kwe-atherosclerosis yamaphethelo aphansi ukuphazamiseka kwe-metabolic. Ikakhulu, ukwanda okuqhubekayo nokuqhubekayo kwe-cholesterol eyingozi yegazi.
Yini i-cholesterol embi? Kulomqondo, kuyisiko ukubiza izingxenyana ezimbili zalo mafutha - ama-lipoprotein aphansi futhi aphansi kakhulu (LDL ne-VLDL). Lezi zinkimbinkimbi zinamandla okubambelela odongeni lomkhumbi futhi komunye nomunye. Ngokweqile kwabo egazini elijikelezayo, baqala ukunamathela nokufaka odongeni lwe-vascular. Ngemuva kwalokho, ekugxilweni okufanayo kokungeniswa, inqubo yokuvuvukala yendawo iyenzeka, ama-lipoprotein amasha agqagqene nefomu le-atheromatous plaques.
Ngokufanayo, isizathu esibalulekile sokuqhamuka kwesifo singaba ukumisela ifaukuthi kwezinye iziguli zilandelwa ngokucacile. Uma lesi sifo sikhule ngokuqinile futhi ngokuqinile emndenini oseduze, kunengozi enkulu yokuthi ingaziveza futhi kuwe.
Kodwa-ke, noma ngabe kuncike kwezakhi zofuzo, kukhona okuthiwa amaqembu anobungozi. Lezi izigaba zabantu i-atherossteosis ezingakhula kakhulu kuyo. Lamaqembu anobungozi afaka:
iziguli ezinezifo ezingemuva - isifo sikashukela i-mellitus kanye / noma umfutho wegazi ophakeme, izifo ezinzima
abantu abanemikhuba emibi - ukubhema nokusebenzisa kabi utshwala
abesilisa abangaphezu kweminyaka engama-40
ehlushwa isifo samathambo - ukuvuvukala ezindongeni ezingemuva zemilenze
iziguli ezinomsoco ongajwayelekile kanye nendlela yokuphila - ukudla okunamafutha ngokweqile ngemuva ngemuva kokungasebenzi.
Kungenzeka yini ukwelapha i-atherosclerosis yamaphethelo aphansi
Ukwazi ukuthi lesi sifo sikhula kanjani, yiziphi izigaba esidlula kuzo nokuthi siziqhakambisa kanjani, cabanga ukuthi ungazilapha kanjani izilonda zamathambo nemithambo yemikhawulo. Futhi kungenzeka ukuthi usule ngokuphelele izitsha emilenzeni yama-plaque.
Okokuqala, ngaphambi kwanoma yikuphi ukwelashwa, udinga ukuguqula indlela ophila ngayo nokudla ngayo. Ukudla kwe-hypocholesterol kanye nokuzivocavoca okwenziwe ngomzimba kuyachazwa. Ngokwezinga lesibili lokuthuthuka kwalesi sifo semithambo yemikhawulo, kunethuba elihle lokuthuthuka kwezempilo ngaphandle kwezidakamizwa.
Izinga legolide lokwelashwa kwe-atherossteosis y miyambo inqubo esetshenziswa odokotela baseNingizimu Korea. Kuyabiza futhi kwenziwa kuphela emitholampilo yabo yendawo. Ukwelapha kungukungenelela kwamaselula - iqembu lama-stem cell lidluliselwa kwisiza se-lesion. Lawa maseli enza kabusha futhi athathe indawo ye-endothelium eyonakele, uyihlanze nge-cholesterol futhi isimo sesiguli sithuthuka kakhulu.
Ngeshwa, umuthi wasekhaya awunabo ubuchwepheshe obunjalo. Izindlela ezivame kakhulu nezisebenzayo emitholampilo yethu ziqinisa, zokwelapha kanye nokuhlinzwa.
Ukwelashwa kwe-atherosclerosis kufanele kube okuphelele futhi kukodwa. Uhlobo lokwelashwa luhlanganiswa uchwepheshe onekhono ngesisekelo sedatha yokuhlaziya nezifundo zenhloso. Izidakamizwa ezinqunyiwe zivela eqenjini lama-statins (atorvastatin, rosuvastatin) noma i-fibrate (gemfibrozil, fenofibrate), izidakamizwa ezithuthukisa ukugcwala kwegazi kwe-trophism kanye nokujikeleza kwegazi kwe-peripheral emikhawulweni engezansi (pentoxifylline). Kufakwe ekwelapheni kukhona ama-anticoagulants, ama-vasodilators (ama-vasodilators) nama-vitamin complexes.
Kunezindlela eziningi zokupheka zomunye umuthi zokwelapha i-atherossteosis. Ama-masters okwelashwa kwabantu ayala nsuku zonke ukuthi aphuze ingilazi yejusi yemifino, adle ama-prunes amaningi kanye nama-apula, uma kungenzeka esikhundleni sawo itiye eliqinile noma ikhofi nge-infusions yama-raspberries nama-rose okhalweni. Kokudla, izindlela zokudla ezivela ekudleni kwasolwandle ezinamafutha amancane ziyathandwa. Zicebile ngezinto ezilandelwayo, ikakhulukazi, iodine, kanye nama-acid e-omega-3 namafutha e-omega-3. I-Iodine yenza kube ngokwejwayelekile ukusebenza kwe-yegilo yegilo kanye nesibindi, futhi i-Omega-3 ijwayeze i-cholesterol futhi isize i-vasot endumhelium ukuba izisule ngokufaka imali ye-lipid.
Ukwelashwa ngokuhlinzwa kuyisilinganiso esivelele sokuvezwa kwe-atherossteosis. Kusetshenziswa kuphela uma kungekho makhambi noma okunye ukwelashwa okulethe umphumela oyifunayo futhi kukhona nengozi yezinkinga ezisongela impilo.
Imisebenzi ekhethekile elandelayo:
Ukuhlinzwa kweBypass kuyindlela evumela ukuthi wena udale indlela ongayikhetha (eyengeziwe) yokuhlinzekelwa kwegazi endaweni ethintekile.
I-balloon angioplasty. Kule nqubo, kudingidwa ucingo emgodini womkhumbi ofana nebhaluni elisesimweni nenqubo yokusebenza. Ngemuva kwalokho, ibhaluni liyakhuphuka, ngaleyo ndlela linwebise umkhumbi futhi likhulule patency yokugeleza kwegazi.
I-Stent. Ngokuvamile kwenziwa ngemuva kwe-balloon angioplasty. Kuyinqubo yokwazisa endaweni ethintekile yomkhumbi i-spacer ngesimo se-tube ephethe ububanzi obudingekayo besikejana. I-lumen ye-artery enwetshiwe ilingisa ngokomzimba ngokomqondo futhi ijwayele ukuhamba kwegazi. Ukubuyekezwa ngemuva kokuhlinzwa kukhombisa ukusebenza kahle kakhulu kwale ndlela.
Ngokuqhekeka kwe-atherosclerosis yamaphethelo aphansi kanye nezimpawu zokuphinyiselwa kwezimpawu ngezikhathi ezithile, kwenziwa ngozwela.
I-Vascular prosthetics - ukufakwa kwesinqe somkhumbi womlenze ophansi ngezinto zokwenziwa ezihlukile.
Ngenqubo egijimayo, ukunqunywa kwezindawo ezi-necrotic (izingxenye zomlenze, izinzwane) kwenziwa futhi izinqubo zazo ezilandelwa ngokungemthetho.
Ukubikezela ngempilo nge-atherossteosis yomlenze
Ukuqashelwa kwalesi sifo kuyinto enhle impela.Uma, lapho kunobuhlungu obukhona lapho uhamba, noma ezinye izikhalazo, thintana nodokotela ngokushesha, khona-ke ezimeni eziningi ungakugwema ukubhekana nezinkinga ezinkulu futhi uyeke lesi sifo. Ngesimo sengqondo sokunganaki empilweni yakho, inqubo esebenzayo enzima, nezinqubo ezivulekile ze-necrotic, imvamisa konke kugcina ngokunqunywa noma izinkinga ezinzima ezingakuholela ekufeni.
Abantu abahlula le-pathology kumele banamathele njalo ekudleni okufanele nasekuziphatheni kwabo. Ungadli okuthosiwe, unikeze yonke imikhuba emibi, wehlise inani lokuxineka. I-Atherossteosis ayinyamalali ngaphandle komkhondo futhi unomphela - uma sekuvele kumlando wezokwelapha wesiguli, khona-ke ngokuvela kwanoma iyiphi ingozi, ingabuya futhi iziveze hhayi emilenzeni kuphela, kodwa ngesimo esihlukile nokwasendaweni.
Isizinda sokuthuthuka kwalesi sifo
Izimbangela ze-atherosclerosis zamaphethelo aphansi, ikhodi ye-ICD-10 eyi-I70, imi ngalendlela elandelayo:
Ukubhema. Kubangela ukuncishiswa kwemithambo futhi kugxilise ukugeleza kwegazi, kudala izimfuneko ze-thrombophlebitis kanye ne-atherosclerosis.
Isisindo esengeziwe, inzuzo ekudleni kokudla okunama-khalori aphezulu akhulisa izinga le-cholesterol "embi".
Ukugula okuthile: isifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme, ukuncipha kokuqalwa kwama-hormone ocansi kanye nokushoda kwe-yegilo yegilo.
Impendulo enganele ezimweni ezicindezelayo.
Ukucindezela kungaphezu kokujwayelekile.
Ubudala (phakathi nobudala).
Isici sobulili (lesi sifo sivame kakhulu ocansini olunamandla).
Ubuhlanga (base-Afrika-baseMelika - izikhathi ezingama-2,5 ngaphezulu).
Ukuntuleka kokuqina komzimba.
Ukulayisha ngokweqile kwengqondo.
Isikhathi esithile, ifomu eliqothulayo lalesi sifo lingaba yi-asymptomatic, kepha kusukela ngesikhathi sokuboniswa kokuqala kwezokwelapha livame ukuthuthuka ngokushesha. Kwezinye izimo, ngenxa ye-thrombosis eguquliwe, ukubonakaliswa kwezokwelapha kwalesi sifo kuvela ngokungalindelekile. Kuyazuzisa ukuthi uzijwayeze uphawu oluphambili lwalesi sifo ngokuningiliziwe futhi uthole indlela efanele yokwelashwa ezosiza ukuqeda ngokushesha.
Kubhekwa njenge-gait eguqukayo, ebonakaliswa yizinhlungu emisipha yamathole, okwenzeka lapho uhamba futhi unyamalala ngemuva kokuphumula okwesikhashana. Ngezilonda ze-atherosclerotic, ubuhlungu besisu be-aorta kanye ne-iliac artery kwenzeka emilenzeni engezansi, i-gluteus kanye nemisipha yabesifazane, isifunda se-lumbar.
Kumuntu, ukubonakaliswa okunjalo kuba yinto ejwayelekile: ubandlululo, ukuthambekela okuphezulu kokushintshwa kwezinga lokushisa, kwezinye izimo kuba nomuzwa wokuqina kwezinyawo. Umbala we-dermatological integument yemilenze uyashintsha, ezigabeni zokuqala zesifo ziyaguquka, bese kamuva ziba yindlovu.
Ezitebhisini ezisekupheleni kakhulu, isembozo sezinyawo neminwe sithola umbala obomvu krwebu-ohlaza okwesibhakabhaka (i-trophic pathologies). Ukwakheka kweziphazamiso ze-trophic kuholela ekulahlekelweni izinwele, izipikili ezibunjiwe. Uma kwenzeka i-occlusion (i-occlusion) yomkhakha we-femoral-popliteal, akukho ukukhula kwezinwele, imvamisa emlenzeni ophansi, futhi uma kwenzeka kulimala i-aorto-iliac sphere, indawo ye-baldness iyanda. Enye yezinto ezivezwa ku-atherosulinosis yomkhakha we-aorto -acac kubhekwa njengokungabinamandla ocansi, kuchazwe yi-pathology yokujikeleza kwegazi ngomqondo wemithambo yangaphakathi ye-iliac. Lesi sibonakaliso senzeka ema-50% eziguli.
Uma i-atherosulinosis yamaphethelo aphansi isolwayo (ikhodi ICD-10 - I70), njengomthetho, izifundo ezijwayelekile zinqunywe. Lokhu kufaka phakathi:
i-angiography ye-MSCT ne-MR,
Ukuhlolwa kwe-Ultra ngemithambo yegazi,
ukuhlolwa kokudlidliza kwemithambo yomlenze,
Ukuqapha umfutho wegazi ukusungula inkomba ye-ankle-brachial,
vakashela udokotela we-phlebologist.
Ngabe kuhamba kanjani?
Odokotela bahlola imilenze ye-trophic, bahlole ukutholakala kwemithambo, i-occlusion.Ngosizo lwe-DS ne-USDG, i-systolic hum yemithambo ye-stenotic iyalalelwa, futhi kulinganiselwa izinga lokudlidliza.
Ukuqinisekisa ukutholwa kwe-atherosclerosis yamaphethelo aphansi, ikhodi I70-10 yayo kungu-I70, ukuhlaziya okujwayelekile okuhlaziya ukuphuma kwegazi kwezinto kungasiza futhi: isiguli esesimweni esisezingeni eliphezulu siphakamisa imilenze yaso ngo-45 °, amadolo akhe aqonde. Udokotela ulinganisa izinga lokugoqa izinyawo nokukhathala kwemilenze.
Ngokubonakalayo lawula amandla okunyakaza okubuhlungu asiza izindawo ezinenkinga yesithombe. I-radiipheral ye-peripheral inikeza ukuqonda kobude kombhede oguquliwe we-venous, kungasiza ukuhlola izinga le-thrombolization, "imigqa yokuzungeza" evelayo, uhlobo lwemithambo yegazi.
Imininingwane ebalulekile ngesimo salesi sifo ihlinzeka ngemithambo yegazi yemilenze. Ekuhlukaniseni i-atherosclerosis yamaphethelo aphansi, ikhodi ye-ICD-10 lapho i-I70, isiza sowesifazane-popliteal sithinteka kakhulu, ngenxa yalesi sizathu, kusukela endaweni yokukhipha imithambo ejulile yomlenze, ukudlidliza ngobuningi beziguli akwenzeki emthanjeni we-popliteal artery noma emithanjeni yezinyawo.
Ubuhlungu obuqhubekayo, lapho umuntu esesimweni esizolile, esidinga ukusetshenziswa kwama-painkiller amasonto ama-2 noma ngaphezulu, isilonda esingumgogodla noma i-necrosis yeminwe, izinyawo ezakhelwe ukumelana nesizinda sokungakwazi ukuqina kokuqina kwemilenze, kuthathwa njengesinkomba sesifo esiyingozi.
Uma ungathathi zinyathelo zokuthuthukisa ukunikezwa kwegazi okungelona elenziwe emzimbeni, ukunqunywa kwensimbi kuzobe kungenakugwenywa engxenyeni ebalulekile yeziguli. Futhi kaningi udokotela akamvumeli isiguli ukuthi sinqunywe, kodwa kunalokho, isiguli, siphelelwe yizinhlungu nokuqwasha, sinxusa udokotela ukuba anqume umlenze ongaphilile.
Izinkomba zokwenziwa kwezenzo zokwakha kabusha ze-atherosclerosis zemikhumbi yama-engela aphansi (ikhodi ye-ICD-10 - I70) yile:
Izimpawu zeqembu elisongelayo lomlenze nezimpawu zalo zokuqala (i-necrosis yeminwe, izilonda ezinyaweni).
Ubuhlungu obuzinzile onyaweni esimweni esizolile. Intuthuko ibonwa ngomlenze wehlisiwe, yingakho iziguli zilala izinyanga zihleli.
Ukunciphisa ibanga lokuhamba kobuhlungu ukuya kumamitha angama-200, uma ukuqondiswa kwendlela yokusabela akuvumeli ukwandisa leli banga.
Inkambo ejwayelekile yalokhu kugula ihambisana nokuwohloka okwandayo. Njengomthetho, ukwanda kwezimpawu ze-ischemia kwenzeka isikhathi eside, kepha lokhu kuhlose kuphela kuze kufike isikhathi lapho i-thrombosis yenzeka khona. Ngalesi sikhathi, inkambo yezokwelapha inganda ngokushesha. Ukwelashwa nge-Reaction akuyeki ukuthuthukiswa kwesifo futhi, cishe ezi-25% zeziguli, ukunqunywa kokuphela kuyaphela.
Ukwelashwa okujwayelekile kwendabuko ye-atherossteosis, kufaka phakathi ukuhlinzwa, kunikeza imiphumela yesikhashana kuphela, futhi ngemuva kwesikhathi esithile lesi sifo sibuya.
Ukwelashwa kwe-atherosclerosis yemikhumbi yemikhawulo ephansi
Ukungenelela kokuhlinzwa kwenziwa kuphela uma kungaphathwa indlela yokusabela engasebenzi, ukuthuthukiswa kwesifo kanye nezigaba zayo zokugcina. Izinhlobo ezithandwa kakhulu zokungenelela kokuhlinzwa: i-balloon angioplasty, bioprosthetics, endarterectomy, ukuhlinzwa kwe-bypass, i-stenting nabanye.
I-Prosthetics yindlela yokwelapha i-atherossteosis lapho i-reservoir ehlanganiswe namachaphaza ifakwa esikhundleni sengxenye yomgogodla wesiguli noma i-prosthesis yokufakelwa. Lapho i-prosthetics, umkhumbi othintekayo uyakhishwa.
Ukuhlinzwa kwe-Bypass kuyindlela yokwelapha isifo lapho sekwenziwe enye indlela edlula lapho kudlule khona isikejana esixhunyiwe - i-shunt. Umthambo wesiguli uqobo kanye nesifo sokufakelwa emzimbeni kungaba yisangul.
I-Endarterectomy - ukususwa kwama-cholesterol plaque kanye nokuqhekeka kwegazi esitsheni. Le ndlela ingasetshenziswa ngokuvalwa okuncane noma ukunciphisa imithambo yegazi.
I-Balloon angioplasty - ukwanda kwe-lumen yomkhumbi onesifo esinamabhaluni akhethekile.Le ndlela yokwelashwa inemiphumela emihle kakhulu emikhunjini ethile kuphela. Umphumela, ngeshwa, akuwona umsebenzi.
I-Stenting - ukufakwa kwentwasahlobo yeshubhu emkhunjini ovalekile, okwandisa indawo yokugcina bese kuqalisa ukopha. Le ndlela ibhekwa njengenye yesimanje kakhulu, njengoba yenziwa ngepunction encane futhi ibekezelelwa isiguli ngokukhululekile. I-Stenting isebenza kuphela ngezilonda zasendaweni, ngenxa yalesi sizathu ayikwazi ukusetshenziswa esimweni ngasinye.
Indlela ephumelelayo yabantu
Kufanele wenze iqoqo kusuka kulezi zinto ezilandelayo: i-wort yase-St John, ukulandelana, i-chamomile, i-sage, i-plantain. Faka ingilazi yamanzi ashisayo ku-isipuni sotshani bese uvumela ukuthi ingxube ibuye, bese ukushisa kuye ku-37 ° C Ngaphambi kokwenza i-compress, indawo ethintekile kumele ihlanzwe futhi iphathwe ngensipho yokuwasha. I-bandage kufanele igoqwe ibe izingqimba eziningana (lapho umuntu emdala, elincane ibhandeshi kufanele libe) futhi lusetshenziswe kulomlenze othintekile. Kuyadingeka ukugcina kufudumele ngesikhathi senqubo isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Isicelo kumele sisetshenziswe kabili ngosuku imizuzu emi-3-4 (kuhle ukukwenza ebusuku). Esigabeni sokuqala sesi sifo, inkambo yokwelashwa nge-compress ihlala amasonto ama-3, khona-ke udinga ukuthatha ikhefu izinyanga eziyisithupha bese uphinda isifundo futhi.
Uma le nkinga ingalashwa, kuma-30% eziguli kungakapheli iminyaka emihlanu lesi sifo siphela ngokufa. Ngaphezu kweminyaka eyi-10, lesi silinganiso sifinyelela kuma-50%. Izimbangela ezibalulekile zokufa ukugqabhuka kwenhliziyo (60%) kanye ne-cerebral hemorrhage (12%). Ukuze uzuze izinguquko ezinkulu, kubalulekile ukulandela lezi zidingo ezilandelayo:
Bheka umsoco ofanele we-atherosulinosis yemikhawulo ephansi.
Isisindo somzimba esilungile.
Hlukana nemikhuba emibi.
Khetha izicathulo ezintofontofo.
Thatha ngokucophelela izipikili zakho.
Ngezikhathi phatha ukonakala esikhunjeni semilenze.
Gwema i-hypothermia yemikhawulo.
Ukulungisa ukusebenza komzimba: uhhafu wehora wokuhamba ngokuthula, ibhayisekili (abaqeqeshi abaningi), ukubhukuda.
Phatha izifo ezihlangene.
Futhi, indlela enhle kakhulu yokuvimbela nokwelashwa kuzoba yisisulu nge-atherosulinosis yemikhawulo ephansi. Kungenziwa zombili emtholampilo futhi ushayele i-masseur yangasese ekhaya.
Manje, inamba enkulu yezindlela ezahlukahlukene zokuzivocavoca ngezinyawo zenzelwe ukuqeda i-atherosclerosis, okuvame kakhulu okuyi:
I-Segmental - imilenze ihlikihlwa kusukela ezingxenyeni ze-proximal. Imiphumela efana nokushaywa, ukunqunywa noma ukuswakama akuvunyelwe ngokuphelele. Ngesikhathi sokuhlinzwa, isiguli sidinga ukuphefumula kahle nangokuphelele ukuze umoya usakaze emzimbeni wonke. Uma kukhona noma yiziphi izilonda esembozweni sesikhumba, khona-ke le ndawo ayelashwa.
I-Vacuum - ingasiza ukuqalisa kabusha i-microcirculation, ithuthukise amabhandeshi emisipha, ikhulule ukulamula. Ngaphezu kwalokho, ngemuva kwethonya elinjalo, umuntu uyakhululwa ebuhlungwini nasekujabuleni, ukuthobeka nokuvuvukala kuyancishiswa.
Ubumnene - buqala ukuhamba kwegazi emzimbeni wonke. Kwenziwa kusuka ezinyaweni kuya emuva engezansi, kungathinta isifunda somlomo wesibeletho. Udokotela ukhokha inzalo ethize ezindaweni ezithintekile, zisetshenziselwa okunye. Kwinqubo ejwayelekile, iqukethe ukusebenza kwe-15-20 ubude besikhathi semizuzu eyi-10-15.
I-Gymnastics ye-atherosclerosis yamaphethelo aphansi isebenza kuphela ngezigaba zokuqala. Bese-ke, kuncike kuzo zonke izincomo.
Ngaphandle kokuhlukile, zonke izinqubo ezichazwe ngezansi kufanele zisetshenziswe phakathi nenkathi ezolile ye-atherosclerosis kanye nezigaba zayo zokuqala. Ngaphezu kwalokho, kufanele ucabangele ubudala bakho nesimo somzimba wakho. Uma kwenzeka ngisho nobuhlungu obuncane kakhulu, isiguli sidinga ukuthatha ikhefu imizuzu embalwa, bese siqhubeka.Uma umuntu ezilolongela ngokuzivocavoca umzimba amasonto amabili no-2 ngasikhathi sinye futhi engazizwa engenamandla, ungangeza umthwalo.
Ukuzivocavoca kwe-atherosulinosis yemikhawulo engezansi, okuyinkimbinkimbi enguNo.
Yima ezinzwaneni zakho. Dlulisa isisindo kusuka komunye umlenze uye kolunye ngesinye. Zama ukwenza konke ngokulinganisa, ngaphandle kokukhathazeka (izikhathi ezi-5-8).
Hamba endaweni, uphakamise amadolo akho phezulu. Imizuzu embalwa izokwanela
Cindezela izandla zakho ebhande lakho. Gobisa umlenze wakho bese uqala ukwenza ukunyakaza okujikelezayo, uzama ukugcina ibhalansi (amahlandla ama-5-6 ohlangothini ngalunye).
Yima phambi kodonga. Thinta izinzwani zodonga kude nge-40-50 cm ukusuka phansi.
Hamba uzungeze igumbi izithende zakho imizuzu engu-1-2.
Ngaphambi kokuthola uhlobo lokuthola ukwelashwa, udokotela uhlola umlando wezokwelapha ukuze acabangele yonke imilayezo, ngaphandle kokucasulwa, okuvuse ukuqala kwalesi sifo.
Iqoqo lezinyathelo lihlose ukunciphisa izinhlungu ezenzeka ngesikhathi sokuqothuka ngezikhathi ezithile, ukubuyisela ukubekezelelana kwengcindezi, ukuvimbela isigaba esiyingozi sokuqhuma kwe-vein, kanye nokuvikela ukubonakala kwezilonda kanye ne-gangrene.
I-atherosclerosis yemikhumbi yamaphethelo aphansi we-ICD khodi 10
I-Atherossteosis yisifo sempucuko. Ngenxa yejubane eliphezulu lempilo, ukunyakaza okungapheli nokucindezelwa kwengqondo, ukulala nokuvuka kuyaphulwa, kuphulwa imithetho yokudla okunempilo.
Lezi nezinye izinto eziningi zithinta iqiniso lokuthi ku-pathology yesistimu yenhliziyo, ushintsho lwe-atherosulinotic emithanjeni yegazi luthatha indawo yokuqala phakathi kwezimbangela zokufa nokufa okuqhubekayo.
Indawo ekhethekile kulezi zibalo ihlalwa yi-atherosulinosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi, njengesimo esinciphisa kakhulu izinga lokuphila lesiguli futhi sibangele ukungakhululeki okukhulu.
Incazelo ye-pathology, ikhodi yayo ngokuya nge-ICD-10
Ukwehla kwe-atherosclerosis yemilenze kuyisifo semithambo lapho kuvinjelwe khona i-vasel lumen, ukugeleza kwegazi emaphethelweni kulinyazwe. Ukuvaleka kwemithambo kungenxa yokuqongelela okukhulu kwama-lipids kuzo.
Amafomu e-cholesterol avela odongeni, olukhula kancane ngosayizi. Njengomphumela walokhu, ama-lumen lumen acwila ngokwengeziwe, abese anqwabelana ngokuphelele. Lokhu kuholela ekungasebenzi kahle egazini, kungabonakali kuphela emilenzeni, kodwa emzimbeni wonke.
Ukwehlukanisa i-atherosulinosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi kunekhodi ngokuya ngokuhlukaniswa kwezifo emhlabeni jikelele (ICD-10) I70.
Kungani i-pathology ikhula?
Isifo i-atherossteotic senzeka ngenxa yomonakalo odongeni lwemithambo yegazi ne-cholesterol ephezulu egazini. Ukuqhubeka kwe-anomaly kwenzeka ngaphansi kokuchayeka njalo nokuhlala isikhathi eside ezintweni ezingezinhle emzimbeni womuntu.
Ukubhema nokusebenzisa kabi utshwala.
Ukudla okungenampilo uma udla ukudla okuningi enamafutha ezilwane amaningi.
Umfutho wegazi ophakeme.
Isifo sikashukela mellitus.
Indlela yokuphila yokwehlisa ukuthula.
I-hypothermia ende yemilenze.
Isifo i-arterial sifo sivame ukuthinta asebekhulile, kepha muva nje lesi sifo siye satholakala kakhulu esizukulwaneni esincane.
Indlela yokulimala kwe-arterial
Ngaphansi kwethonya lezinto ezimbi, umonakalo uvela odongeni lwemithambo yegazi. Endaweni yazo, ama-lipid aqala ukuqongelela, akha ibala eliphuzi. Eduze kwabo, izicubu ezithintekayo ziqala ukwakha, njengomphumela lapho kukhula khona uhlaka. Ezinye izinto zingahlala ngaphezulu kwawo: usawoti, ukuhlanganiswa kwe-fibrin, ama-platelet.
Indawo ethintekile ivinjelwe kakhulu i-plaque. Izinhlayiya zingaqhamuka kuwo, ezihamba emzimbeni ngokuhamba kwegazi futhi ziyakwazi ukuvalela imithambo.
Ngenxa yokujikeleza okungahambi kahle emithanjeni, izicubu zihlupheka ngenxa yokuntuleka komoya-mpilo kanye nezakhi zomzimba. Lokhu kufaka phakathi ukuthuthukiswa kwe-ischemia ne-cell necrosis.
Isifo se-Artery sikhula iminyaka eminingana. Kungenza isikhathi eside kungabangeli zimpawu ezimbi, ngakho-ke umuntu uvame ukungaboni ukuthi uyagula.
Imvamisa, izimpawu zivele zivele ezigabeni zokugcina ze-pathology. Isibonakaliso esiyinhloko Ubuhlungu ngesikhathi sokunyakaza. Iyaziveza ngisho nokuhamba iDemo, kuhambisana nokukhathala komlenze onamandla.
Ngaphezu kobuhlungu, iziguli zikhathazekile ngokuboniswa okulandelayo:
ukuzwela ngokweqile emazingeni okushisa aphansi,
umuzwa wokushiswa isikhumba njalo,
ukubonakala kwemifantu ebuhlungu ezithendeni,
ukuqina noma ubumnyama besikhumba,
ukonakala kwesimo sezipikili,
Nge-atherossteosis yemithambo yesimilo yabesilisa emadodeni, ukwephulwa komsebenzi wobulili kungavela ukungabi namandla.
Ukulungiswa kokudla okunempilo kanye nendlela yokuphila
Ama-atherossteotic plaque akhiwa phambi kwenani elikhulu lamafutha ayingozi egazini. Amathuba amaningi okungena emzimbeni kanye nokudla. Kungakho iziguli kudingeka zilandele indlela yokudla.
Ukudla akufanele kube nokudla okuphezulu emafutheni ezilwane, okubandakanya inyama enamafutha, ukudla okusheshayo, imikhiqizo yobisi enenkomba ephezulu yokuqukethwe kwamafutha, inyama ebhemayo, imikhiqizo yenyama eseqediwe, amasoseji, ukudla okuthosiwe.
Kunconywa ukufaka ukudla kwezitshalo okuningi kwimenyu: imifino, izithelo, amajikijolo, imifino. Kufanele futhi udle okusanhlamvu, izinhlobo ezinamafutha amancane enyama nezinhlanzi.
Iziguli ezine-arteriosulinosis yemithambo yomzimba zidinga ukushintshela indlela yokuphila enempilo. Futhi lokhu akusebenzi ekudleni kuphela. Odokotela balule ukuhambisa ngaphezulu, ukwenza izivivinyo zokwelapha, kepha hhayi ukweqile imilenze. Futhi, nakanjani, kuyodingeka uyeke imikhuba emibi.
Ukuthatha umuthi kanye ne-physiotherapy
Ngesifo se-atherossteotic, ukuphuza umuthi kuyadingeka isikhathi eside - okungenani izinyanga ezimbili. Ukwelashwa ngezidakamizwa kubandakanya ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezilandelayo:
Izidakamizwa ezisebenzayo. Imithi isiza ukwenza ukukhanya kwemithambo kubanzi, okuvimbela ukukhula kwe-ischemia.
Ama-antiplatelet agents. Basiza ukuvimbela i-thrombosis, yenza ngokwejwayelekile ukuhamba kwegazi. Ngesikhathi sokwelashwa ngama-ejenti anjalo, ukuhlolwa kwegazi kwelebhu okujwayelekile kuyadingeka njalo.
Izidakamizwa eziklanyelwe ukuthuthukisa izakhiwo zegazi.
Ama-analgesics ukuqeda izinhlungu emilenzeni lapho uhamba.
Njengokwengezwa kwezidakamizwa, odokotela banquma izinqubo zomzimba. Isebenza ngempumelelo kwe-atherosclerosis yemikhumbi yemilenze yezindlela ezinjenge-UHF, i-electrophoresis, i-balneotherapy, amabhathi odaka.
Imininingwane ejwayelekile ngalesi sifo nezimbangela zayo
I-Atherossteosis, noma i-metabolic arteriosclerosis, isifo esisehlelweni semikhumbi yohlobo olukhulu noluphakathi lwento ye-elite ne-elastic-muscular, ngokulandelana.
Ngokusho kwe-International Classization of Diseases (ICD-10), lesi sifo sabelwa iqembu le-atherosclerosis nekhodi engu-170.
Ngokuthuthuka kwe-pathology, udonga lwemikhumbi yokuvuselela yonakaliswa, okuholela ekulahlekelweni kwekhono lokwelula nokwenelelela amandla wokuphuma kwenhliziyo.
Iningi labantu yi-atherosclerosis - okungena emafutheni, ama-plaque anezinguquko ezincane eziphilayo atholakala ngisho nakwintsha eneminyaka eyi-14-15, kepha iqembu lengozi lifaka iningi labesilisa (isilinganiso sabesilisa abagulayo kwabesifazane abano-5 kuye ku-1) abadala kunamashumi amane.
Futhi, izici zobungozi, okungukuthi, izizathu ezandisa ithuba lesifo, zifaka:
Iminyaka.Ngemuva kweminyaka engama-21 emzimbeni womuntu, ukuvela kwe-thymus kwenzeka, okuyikhona okubangela ukwanda, ukuguqulwa kwamaseli we-immune cell athile, ngenxa yalokhu kunamathuba amaningi okulimala kwe-antigen wall wall, okungenye yezimbangela ze-atherosulinosis. Futhi, ngokuguga, ukuqina kwemithambo yegazi ngokwemvelo kuncipha ngenxa yokuwohloka kwe-collagen, okusheshisa ukuqina kwodonga nge-fat-protein detritus.
Ukudla okungenampilo nokukhuluphala ngokweqile. Ukweqisa okwama-carbohydrate namafutha we-trans ekudleni kuholela ekuntuleni kwezinhlelo ze-enzyme ezingakwazi ukubhidliza izinto ezingenayo. Ngenxa yalokhu, amafutha kanye ne-cholesterol elintantayo ngokukhululeka egazini idluliselwa kuyi-endothelium odongeni lwesitsha futhi ihlala lapho, iqongelela.
Ukuntuleka kokuzivocavoca. Abantu ezweni lanamuhla abanyakazi kakhulu, futhi izicubu zenhliziyo ziqala ukukhombisa izimpawu ze-atrophy. Lokhu kuholela ekuwohlokeni kokugeleza kwegazi, kuyilapho izinto ezinamafutha zingangena kalula ngaphakathi kolwelwesi oluhleliwe lwemithambo.
Ukubhema. Ama-spasms ahlala njalo kanye nokuphumula kwemithambo yegazi ngenxa yesenzo se-nicotine esebenzayo kuholela ekuphulweni kwe-innervation ekhuphukayo. Uhlelo lwezinzwa lwe-metasympathetic, oluchungechunge lwayo oluphelele kanye ne-ganglia olusodongeni, luphendula ngokungafanele imiyalo evela ebuchosheni. Ukulawulwa kwe-motility kuyaphazamiseka, i-artery iba inyamazane elula ye-fibrin namafutha.
Izizathu ezibangela ukuthuthuka okusheshayo kwe-atherosclerosis zibandakanya ukuba khona kwesifo sikashukela kanye nomfutho wegazi ophakeme emzimbeni wesiguli.
Lezi zifo izikhathi eziningana zandisa amathuba okushintshwa kwe-atherosulinotic.
Isifo sikashukela siholela ekuhlukaniseni yonke imithambo ye-carbohydrate nemiphumela engaphezu kwekhulu ephazamisekile, kufaka phakathi i-oxidation yama-lipids yamahhala kumandla namanzi.
Ukungenelela kokuhlinzwa kwe-atherosclerosis kunqunywe ezigabeni ezinzima, lapho kungenakwenzeka ukubhekana nakho ngosizo lwemithi. Izindlela zokwelapha ezivulekile futhi ezingenayo kancane ziyasetshenziswa. Lezi ziphephe kakhulu, kepha zisebenza kuphela ezilondeni ezincane zemithambo yegazi.
Lezi zinhlobo ezilandelayo zomsebenzi zisetshenziselwa i-atherossteosis kanye ne-endarteritis yemithambo yemilenze:
I-Endarterectomy. Kuphinda kususwe ingxenye elimele yomthambo.
Ukuhlinzwa kweBypass. Kulokhu kusebenza, esikhundleni sengxenye ethintekile yomkhumbi, kufakwa i-prosthesis evela ezintweni zokwenziwa noma izicubu zeminye imithambo.
I-balloon angioplasty. I-catheter ekhethekile enebhaluni ifakwa ku-lumen ye-arterial. Ngiyabonga kuye, izindonga zemithambo zinwebeka, esiza ukukwenza kube kwejwayelekile ukuhamba kwegazi.
I-Stent. I-stent ifakwe ku-lumen yomkhumbi nokuqukethwe kwezinto ezifaka isandla ekuphindweni kabusha kwezigcawu ze-atherosulinotic.
Ngokuthuthuka kwe-gangrene noma inani elikhulu lezilonda, kususwa ngokuphelele umlenze. Lo mphumela wenzeka kuphela esigabeni sokugcina sesifo se-atherosulinotic, ngenxa yalokho, kubalulekile ukuqala ukwelapha i-vasology pathology ngokushesha okukhulu.
I-Arteriossteosis yisifo esiyingozi, ngakho-ke kufanele kuthathwe ukunakekelwa ukuze kusivikele. Izindlela zokuvimbela kuzosiza ekunciphiseni ubungozi bokuhlukumezeka okungama-vascular. Odokotela beluleka okulandelayo:
Yenqaba imikhuba emibi.
Ukulawula isisindo somzimba.
Gwema i-hypothermia yemilenze.
Futhi, ukuthola nokuvimbela okufika ngesikhathi kwe-atherossteosis, kuyadingeka ukuthi kuhlolwe imithambo ngonyaka. Lesi yisinyathelo esibaluleke kakhulu nesisebenzayo esikuvumela ukuthi uzivikele ezinkingeni eziningi zempilo.
Hlukanisa phakathi kwe-non-stenotic ne-stenosing atherosclerosis, noma empeleni, lesi yisifo esifanayo. I-sclerosis engeyona nje i-stenotic yisigaba sokuqala salesi sifo. Kulesi sigaba, kubekwa kuncishiswe ukukhanyiswa kwemikhumbi ngaphansi kwama-50%.
Iseluleko! Singasho ukuthi i-non-stenotic atherossteosis iwuphawu lweminyaka.Cishe bonke abantu abadala kuneminyaka engama-50, ungabona izimpawu zalesi sifo.
Kodwa-ke, i-non-stenotic vasler sclerosis lapho kunezinto ezicasulayo iyaqhubeka futhi lesi sifo singena esigabeni esibi kakhulu. Izimpawu eziphambili ze-atherosulinosis eziqhubekayo zemithambo yemilenze:
ukubonakala komzwilili wokumsulwa, umuzwa owethusayo noma "amaqhuqhuva we-goose",
ukukhathala, ukubukeka kobuhlungu emilenzeni, noma kungaba nokuzikhandla okuncane,
Iseluleko! Lapho kuthinteka kakhulu imithambo, kulapho isiguli singahamba ngaphambi kokuqala kobuhlungu. Ezigabeni zakamuva, izinhlungu zenzeka nakuphumula.
isikhumba semilenze, ikakhulukazi ezinyaweni. Umbala wesikhumba uba "ngemabula", ukoma kanye ne-peeling kuyaphawulwa. Ukushuba nobuthakathaka bamathoyizi,
ezigabeni zakamuva, kuvela izilonda eziyingozi esikhumbeni, eziphilise kabi.
Uma i-atherossteosis ingelashwa, khona-ke izimpawu ziyokhula ngokuqinile. Ngokuphazamiseka okukhulu kokujikeleza kwezimpawu, kuvela izimpawu zezicubu ze-necrosis. Esithombeni ungabona ukuthi izindawo ezithintekile emilenzeni yesiguli zibukeka kanjani. Ngokuhamba kwesikhathi, i-necrosis ingangena ku-gangrene, okuzoholela kwisidingo sokunqunywa komlenze.
Izici ezinomthelela ekuthuthukiseni lesi sifo
Vele, ushintsho lwe-atherosclerotic emzimbeni lungabangelwa yizizathu ezizimele zomuntu. Ukuvela kwezinguquko emikhunjini kubangelwa yizinto ezinjengokuthi:
Izifo ezihlangana nazo: umfutho wegazi ophakeme, isifo sikashukela, i-hyperthyroidism, njll.
Kodwa-ke, imvamisa ukuqhubekela phambili kwenqubo ye-pathological kuholela kwimikhuba emibi yomuntu. Izizathu eziyinhloko:
ukubhema kanye nokuphuza njalo utshwala,
ukungondleki. Ukudla inani elikhulu lamafutha ezilwane nokudla okuhlungisiwe kungakhuphula amazinga we-cholesterol.
Iseluleko! Ukondleka okungahambi kahle kuvame ukudala ukukhuluphala ngokweqile, futhi ukukhuluphala kungenye into eholela ekuthuthukisweni kwe-atherosclerosis.
Ezigabeni zokuqala, umuthi unikeza imiphumela emihle. Ukuze ulaphe ngempumelelo i-atherossteosis, kuyadingeka ukusebenzisa izidakamizwa okuhloswe ngazo ukwehlisa amazinga e-cholesterol egazini, ukuqinisa izindonga zemithambo yegazi, kanye nokwenza ngcono izakhi zomsoco kwezicubu.
Ukwenza ukwelashwa ngezidakamizwa, odokotela bavame ukunquma le mithi elandelayo:
Ezigabeni zokuqala ze-atherosulinosis noma ze-prophylaxis, kubekwa iziqu ezilandelanayo zama-asidi acid. Lezi izidakamizwa ezifana neColestitis, i-Questran, njll.
Ngokukhulu ngokweqile kwe-cholesterol, kunqunywa ama-statin. Lezi yi-Mevacor, Pravastatin, Holetar, njll.
Ukuqinisa izindonga zemithambo yegazi, kulungiselelwe amalungiselelo e-nicotinic acid.
Kunoma yikuphi, ukwelashwa kwezidakamizwa kunqunywa ngokuhlukile, kucatshangelwa izici zenkambo yalesi sifo kanye nokuba khona kwezifo ezihlangene. Ngakho-ke, uhlelo lokwelashwa olujwayelekile olwamukelwe bonke alukho.
Lapho kukhona izilonda eziyisiqubu, kufanele welashwe usebenzisa izidakamizwa zasendaweni. Faka amafutha okugcoba aqukethe ama-antibhiliya nezinto zokwandisa ukuvuselelwa kabusha.
Ezigabeni zakamuva zesifo, ukwelashwa okungahle kungasebenzi kahle ngokwanele, ngakho-ke kufanele usebenzise izindlela zokuhlinzwa. Namuhla, imisebenzi elandelayo ivame ukusetshenziswa:
I-balloon angioplasty. Lokhu kungukusebenza okumnene okwenziwa ngaphansi kwe-anesthesia yendawo. Ngesikhathi senqubo, i-lumen yemikhumbi ethintekayo iyabiliswa.
Ukuqina. Kufakwa isigaxa esinzima engxenyeni ethintekile yomthambo, ongavumeli ukuvimba ukuphuma kwegazi.
Ukuhlinzwa kweBypass. Ukuhlinzwa lapho i-workaround yenzelwe ukunyakaza kwegazi.
Ukususa indawo ethintekile ngokufaka esikhundleni sayo ngezinto zokwenziwa.
Izici eziyinhloko ze-pathogenesis yalesi sifo
I-pathogenesis yalesi sifo ayikafundisiswa kahle, kepha izigaba eziphambili sezivele zidaluliwe. Esigabeni sokuqala se-dolipid sokushintshwa kwamanani we-minuscule, kunokuqhuma okuncane kwamaseli, ukukhuphuka kokuqina kwezimpawu zezitho zabo, isizinda esandisiwe sokugcwala kwamafomu wokuhamba we-lipid nokungalingani kwabo (ukuze kugcinwe i-homeostasis, isilinganiso sokuxineka okukhulu kwamazinga aphansi we-lipoproteins esifundeni se-4: 1 kufanele sigcinwe).
Esigabeni se-lipoidosis, ukwakheka kwamaseli we-x xoma womzimba (obizwa nangokuthi amaseli we-foam) kuyabhekwa, o-cytoplasm wawo ugcotshwe ngamaconsi e-fat and cholesterol. Ngama-Macroscopically, ngeso elinqunu, bakha amabala aphuzi nemivimbo esitsheni.
Esigabeni se-fibromatosis, ama-platelet anamathela kulokhu kuqhuma, abheka i-plaque ekhulayo njengendawo yomonakalo futhi ashesha ukuyifaka.
Kepha lapho beqongelela, bavikela i-fibrin yodwa, bekhulisa isimo kuphela. I-plaque iyanda ngosayizi, ivimba i-lumen yomkhumbi futhi iphazamise ukuhamba kwegazi kwendawo ethile noma isitho.
I-Atheromatosis yisigaba esithuthukile, ngakho-ke, izinkinga ezikulesi sigaba kufanele zelashwe ngemithi. Kufanele kubhekwe kakhulu ukuthi kungenzeka ukuba nezilonda ezihlukanisiwe nokuguguleka kodonga lomkhumbi.
Izimpawu eziphambili zalesi sifo
I-Atherossteosis ayikhuli endaweni eyodwa kuphela. Lesi sifo sine-multifocal, sinezinto eziningi ezibhekwayo zenqubo ye-pathological emzimbeni wonke. Ukubonakaliswa kuncike ekwazini kwe-plaque kanye nezinga lentuthuko yalo.
Ubuhlungu obukhulu nokungahambi kahle kubangelwa yi-atherosclerosis yemikhumbi yezindawo eziphansi, enikezwe le khodi ngokusho kwe-ICD-10 170.2. Kulesi simo, isigxobo esivala ukugqwala kwemikhumbi emikhulu yemilenze, ilunga alitholi umoya-mpilo owanele kanye nezakhi zomzimba. Ekuqaleni isiguli sizwa kuphela isimungulu ezingxenyeni ze-distal, sidonsa emilenzeni.
Ngemuva kwalokho, ukuhamba isikhathi eside, kuvela umuzwa ovuthayo onamandla, omisa kuphela emva kokuma kanye nokuphefumula okufushane. Imilenze yami ilimale kabi, futhi isiguli siyaxhuga. Ngezigaba ezilandelako, izilonda ezisesilinganisweni namanxeba, ukuphefumula okuphelele, ukuqina okungamahlalakhona, i-atrophy, ubuhlungu bungabekezeleleki.
Umphumela walesi simo yi-gangrene, ukunqunywa okulandelayo, noma ukufakwa kwethimba elihlanganisiwe lemikhumbi ebucayi.
I-aorta iyathinteka ekuqaleni, futhi lokhu kugcwele ukuwohloka okujwayelekile kokujikeleza kwegazi ekujikelezeni kwe-pulmonary. Isibonakaliso esiyinhloko kulezi ziguli umfutho wegazi ophakeme. I-Aortic atherosclerosis ingahle ibangele i-aneurysm kanye ne-hemorrhage enkulu.
I-atherosclerosis yemithambo yenhliziyo iyingozi. Ngalesi kwasendaweni, i-IHD (isifo senhliziyo) kungenzeka ngenxa yokwehla komoya ophefumula emisipha yenhliziyo ngokuhlaselwa yi-angina. Ukugeleza kwegazi kwe-Coronary kukhubazekile, futhi amathuba okuthi i-myocardial infarction inyuke.
Izinguquko ze-atherossteotic emikhunjini yamakhemikhali zigcwele imemori ephazamisekile, ukuxhumanisa, ukudangala, ukuqwasha. Ingqondo itholakala kalula ku-ischemia, futhi amaqoqo ama-neural akasabuyiselwa emuva kokufa.
Ukuxilongwa kanye nokwelashwa kwe-atherosulinosis obliterans of the low decrease
Uma usola lokhu kugula okungathi sína nokuba khona kwezimpawu zokuqala, isiguli kufanele sibonane nodokotela oyi-phlebologist. Uzokwenza isifundo sezinhloso futhi anikeze uchungechunge lwezivivinyo ezisizayo nezelabhoratri.
Lokhu kufaka phakathi ukuhlolwa kwegazi okujwayelekile nokwe-biochemical kwe-cholesterol, i-LDL, i-HDL, i-chylomicrons, i-triglycerides yamahhala.
I-Ultrasound yenziwa kusetshenziswa i-dopplerography, i-rheovasography, i-arteriography, i-x-ray isebenzisa umehluko wemithambo.
I-Pathology iphathwa ngezindlela zokulondolozwa ezigabeni zokuqala futhi ngokukhethekile ngokungenelela kokuhlinzwa ezigabeni zakamuva.
Ungaphendukela kwisisombululo sezokwelapha enkingeni ngisho nangaphambi kokuqala kophawu lokukhubazeka okukhulu.
Kulokhu, kusetshenziswa izidakamizwa ezilandelayo:
I-Zinc-gelatin unamathisela i-Unna.Lo muthi ulahlekelwa ukuthandwa kwawo ngenxa yokwenqatshwa kosokhemisi ukukhiqiza izixube zabo namalungiselelo, kepha kusebenza kakhulu. Kuthuthukisa i-trophism emisipha, kusetshenziselwa ukumelana nezilonda eziyizidlakudla futhi kuthoba imithambo yegazi endaweni yokufaka isicelo. Ilungiselelwe kusuka engxenyeni eyodwa ye-gelatin, ingxenye eyodwa yeZinc Oxide, izingxenye ezine zamanzi kanye nezingxenye ezine ze-glycerin. I-paste isetshenziswa ngemuva kokushisa kubhavu wamanzi, ngemuva kwalokho iboshwe.
Izidakamizwa ezijwayelekile zilinganisa izinga le-cholesterol ephelele ne-LDL. Lokhu kufaka phakathi iZokor, Cholestyramine, Atorvastatin, Lovastatin, Fluvastatin, Quantalan. Kukhona izifundo ezisekela le mithi ekwelapheni i-atherossteosis, kepha lokhu kusebenza kuphela ezigabeni zokuqala zesifo. Izinga le-cholesterol lilungiswa ngokuphelele ngomuthi nokudla okunzima, kepha uma izinguquko ze-organic odongeni lomkhumbi sezenzekile, leli qembu liphelelwa wukusebenza kwalo.
Ukwenza ngcono i-trophism, ukugcotshwa kwamafutha anempilo kanye nokusebenza kokujikeleza, ukusheshisa izinqubo ze-metabolic kumaseli, kuyasetshenziswa. Lawa ngama-Actovegin, Trental, amavithamini wamaqembu C, B, E endaweni yama-antioxidants kanye naphambi kwangaphambi kokuhlanganiswa kwezinto ezintsha zokubuyiselwa okusheshayo kwezakhiwo ezilimele.
Ama-Angioprotectors anqunyelwe ukuvimba ubunzima futhi avimbele ukuqhubeka kwenqubo ye-pathological. Faka isicelo seParmidin, i-Quercetin, ne-Dicinon.
Ukwelashwa okubonakalayo kwenziwa ngama-antispasmodics (Dibazol, Papaverine, No-Shpa, Pentoxifylline), ama-painkillers.
Izindlela zokuhlinzwa zihlanganisa i-angioplasty ngaphansi kokulawulwa okwenziwa ngesandla, ukwethulwa kwe-arterial stent noma ukunwetshwa komkhumbi othintekayo kusetshenziswa i-balloon probe. Ukusebenza kwalezi zindlela kuphakeme kakhulu.
Kulula kakhulu ukuvikela isifo kunokuselapha. Endabeni yokuqothula i-atherosulinosis yamaphethelo aphansi, ukwelashwa kokudla kuboniswa ngaphandle kwenqwaba yamafutha ezilwane asetshenzisiwe nosawoti ngaphezu kwe-6 g ngosuku. Kuyadingeka ukuqeda umlutha, ukuhambisa okuningi bese uye ku-physiotherapy.
Ungayiphatha kanjani i-atherosclerosis yamaphethelo aphansi ichazwe kuvidiyo kule vidiyo.
Khombisa ushukela wakho noma khetha ubulili bezincomo Ukuthungatha Ukutholwa Akutholakalanga Ukusesha akutholakalanga
Ukubuyekezwa kunikelwe endimeni yokuvuvukala ekwakheni inqubo ye-atherosulinotic ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus. Ukubukwa kwesimanje kwezixhumanisi ezijwayelekile ze-pathogenetic zokuvuvukala nama-atherogenesis kubhekwa.
Izimpawu ze-atherosclerosis zamaphethelo aphansi kanye nokufihlakala kwalesi sifo Ukuqhekeka kwe-Vascular emlenzeni Ngemuva kwezifo ze-ischemic zenhliziyo nobuchopho, i-IB yezindawo eziphakeme ezingezansi inendlela ekhethekile ye-atherosclerosis, lapho iyimbangela enkulu yokuqhuma okukhulu kwemithambo yegazi, ngenxa yokuthuthuka kwezinqubo ze-pathological kuzo.
Indlela yokuthola ubulukhuni be-ischemia yezicubu zomlenze ophansi ezigulini ezine-atherosclerosis obliterans zemithambo ephansi yomlenze ezigulini ezine-atherosclerosis eseqisayo yemikhumbi yamaphethelo aphansi (i-OASNK). Umnyombo wendlela ukuthi ku-serum yegazi lesiguli inquma ukukhula kwe-vascular endothelial grow factor kanye ne-monocytic chemotactic protein-1, ukubala isilinganiso se-vascular endothelial grow factor to monocytic chemotactic protein-1. Inani elivela ku-0.89-0.7, ngithola i-degree yokuqothula kwe-atherosclerosis yemikhumbi yemikhawulo ephansi.
I-Atherossteosis yisifo esine nkambo engapheli, ebonakala ngomonakalo emithanjeni yohlobo lwe-musical-elastic and nokunwebeka, okuvela ngenxa yokulimala kwamafutha metabolism, ehambisana nokufakwa kwamachaphaza cholesterol odongeni lwangaphakathi lwemithambo yegazi.
I-atherosulinosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi: izimbangela kanye nokwelashwa Namuhla, isihloko sengxoxo yethu sizoba yi-atherosclerosis, esithinta imithambo yemikhawulo ephansi. Lesi sifo sivame kakhulu futhi sibizwa ngokuthi yi-obliterating atherossteosis.
Ngokwakhiwa kwe-atherosclerotic plaque emagatsheni e-aorta aphakamisa amathumbu, kuvela ischemia yodonga lwayo. Ukuvalwa kancane kancane kwemithambo kubangela ukugcwala kobuhlungu (isisu esibuhlungu besisu) nokuphazamiseka kwesitho (ischemic colitis), ngokuqhuma okungazelelwe kokuhlasela kwenhliziyo kwenzeka.
Izimpawu nokwelashwa kwe-stenosing atherosulinosis yemithambo yemikhawulo ephansi I-Obliterating (stenosing) atherosulinosis iba khona ebusheni bokuqala. Ngobudala, ama-lipids aqongelela i-lumen yemithambo yegazi kubantu, abathintekayo ekwakhekeni kwama-cholesterol plaque.
Kuyini i-atherosclerosis futhi kungani kuyingozi Manje cishe wonke umuntu uyazi ukuthi izifo zenhliziyo ziyimbangela evame kakhulu yokukhubazeka nokufa eminyakeni yobudala ekhiqiza kakhulu umuntu.
Ungayelapha kanjani i-stenosing atherosclerosis ye-brachiocephalic artery I-Stenosing atherosulinosis yemithambo ye-brachiocephalic, ukwelashwa kwayo okunezici ezithile, kungenye yezindlela ezivame kakhulu ze-atherossteosis.
Ukwehlukanisa i-atherosulinosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi: kufanelekile ukukhathazeka? Kunezifo eziningi ezenzeka ngokungabonakali kubantu. Baziveza lapho sekuvele ukuthi kukhona usongo oluthile empilweni.
I-Cerebral atherosulinosis yemikhumbi yokuqothula, indlela eqonde ekuwohlokeni komqondo. "Ekukhulumeni kahle," i-sclerosis "isho ukungabikhona kwememori, kuvame ukuhlanganisa lokhu nokukhula.
Isifo senhliziyo, esinye sezifo ezivame kakhulu ezweni lanamuhla. Kakhulu, izimbangela eziningi zalezi zimo ze-pathological yizinguquko ze-atherosulinotic vascular.
I-atherosulinosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi: izimbangela nokwelashwa Ukuze uvikele i-atherosclerosis, kuyadingeka ukufaka imikhiqizo ekhuthaza ukuhamba kwegazi ekudleni kwakho.
I-non-stenotic atherosclerosis yiyona ndlela yokuqala yesifo se-vascular engaxazululwa ngokwelashwa okufika ngesikhathi. Isifo i-atherossteotic sivame ukuthinta isistimu yokujikeleza kwabantu asebekhulile, yemikhumbi yabo eshintsha ngenxa yokuguga komzimba.
I-atherosulinosis yemikhumbi: siyini lesi sifo futhi selashwa kanjani? I-Atherossteosis iyindlela yokusebenza ebucayi ethi, ngaphandle kokwelashwa okufanele, iholele ezinkingeni, futhi kwezinye izimo, ekufeni komuntu.
I-atherosclerosis yezimpawu zemithambo ye-cerebral. I-atherosulinosis yezimpawu zobuchopho I-Atherossteosis, ethinta imithambo yobuchopho, yisifo esivame ukwenzeka.
Kumuntu ophilile, igazi lijikeleza ngokukhululekile emithanjeni yazo zonke izingxenye zomzimba. Igazi linikeza umoya-mpilo nezakhi zomzimba kuwo wonke amalungu alo mzimba. Ngalesi sifo - i-atherossteosis, okuthiwa ama-plaque akhiwa odongeni lwangaphakathi lwemithambo, okuholela ekunciphiseni kwemithambo yegazi, okuholela ekunciphiseni kokuphuma komthambo wegazi.
Ekupheleni kwe-XX nasekuqaleni kwesifo sekhulu le-XXI uhlelo lwezinhliziyo zathola umlingiswa wobhubhane, okuyimbangela eyinhloko yokukhubazeka nokufa kwesibalo samazwe athuthukile ngokomnotho.
Kungani i-atherosclerotic cardiossteosis ibangela ukufa. Eminyakeni yamuva nje, kube nenqubo “yokuvuselelwa” kwezinhlobo ezithile zezifo zenhliziyo.
Izici zokuthuthuka kwalesi sifo i-Atherossteosis yisifo esingalapheki lapho ukugqwala kwezindonga zemithambo yegazi kuphulwe khona kuthi ukukhanya kwabo kuncishiswe.
Ingozi engapheliyo ye-cerebrovascular (CMS): yini? 1. Ukuhlinzekwa kwegazi ebuchosheni 2. Izimbangela zesifo 3. Izindlela Zokuthuthuka 4. Ukubonakaliswa Komtholampilo 5. Ukuxilongwa 6.Ukwelashwa kweCerebrovascular pathology kuthatha isikhundla esiphambili kuzo zonke izifo ze-neurological.
Izimpawu nokwelashwa kwe-obleteric atherosulinosis yemithambo yemikhawulo ephansi I-Atherosulinosis yemithambo yemikhawulo engezansi, izimpawu, ukwelashwa kwalesi sifo kuyisihloko esishisayo esikhathini sethu.
Ukwelashwa kokuhlinzwa kwezilonda ze-atherosclerotic of the artery of echibini le-carotid. UMnyango weNeurosurgery weRussia Military Medical Academy, eSt. Petersburg, eRussia.
Izimpawu nokwelashwa kwe-arteryosulinosis yendawo eqoqweni
Kuyini ukwehlukanisa i-atherosclerosis? Yini izimpawu zayo, ukuxilongwa kanye nokwelashwa okungenzeka?
Ubuhlungu bomlenze buvame ukubangelwa ukukhathala okungapheli, kepha imvamisa, ikakhulukazi lapho umuntu mdala, ukuboniswa okunjalo kungakhombisa isifo esibi kakhulu - ukuqeda i-atherosclerosis.
Ukulwa nalesi sifo esiyingozi, baphendukela kusizo lochwepheshe (ama-phlebologists, ama-cardiologists, odokotela abahlinzayo, njll.). Ukunakekelwa kwezokwelashwa okunikezwe ngesikhathi, uma kungayibuyiseli ngokuphelele imikhumbi, okungenani kuthuthukisa isimo esivamile sesiguli.
I-atherossteosis obliterans - akunjalo?
I-Atherossteosis obliterans yisifo esibonakaliswa ukuphazamiseka okuningi:
ukuthuthukiswa kwezicubu zomzimba, njll.
Ezimweni ezisezingeni eliphakeme kakhulu, ukuthuthukiswa kwe-pathology kuthinta imikhumbi emikhulu etholakala emgodini wesisu. Ngenxa yalokhu, imithambo yegazi efana ne-popliteal, femoral ne-tibial ithinteka ikakhulukazi, futhi ububanzi bawo buyancishiswa. Uma lesi sifo singalashwa, kuyaphazamiseka imilenze nezinyawo eziphansi.
KUBALULEKILE! Lesi sifo singakhula isikhathi eside (kwesinye isikhathi le nqubo singadonsa iminyaka eyishumi noma ngaphezulu) bese siqhamuka singalindele.
Kunezigaba ezine ekwakhiweni kwalesi sifo se-vascular:
Owokuqala (preclinical) ubonakala ngokwephulwa kwe-lipid metabolism. Ubuhlungu ezindaweni eziphansi buzibonakalisa kuphela ngemuva kokuzivocavoca umzimba isikhathi eside noma ukuhamba. Imvamisa, lesi sigaba siqhubeka ngaphandle kwezimpawu.
Esigabeni sesibili, ukubonakaliswa kokuqala kwe-pathology kuwuphawu: ukuhamba kobuhlungu emilenzeni engezansi ngemuva kokuhamba isikhashana (kufika kumamitha angama-250-1000). Futhi, imithambo yegazi incishisiwe ngo-20-40%.
Isigaba sesithathu sihambisana ne-ischemia ebucayi, nobuhlungu bomlenze buvela ngemuva kwamamitha angama-50-100.
Isigaba sesine sivezwa ngokuvela kwezilonda ezisesiswini sokudla, i-necrosis ne-gangrene. Kulokhu, izinhlungu ziba abangane bomuntu abahlale bekhona, ngisho nalapho ulele.
Uma uphendukela kochwepheshe kwizimpawu zokuqala zalesi sifo, unganciphisa ubungozi be-necrosis ne-gangrene, futhi, ngenxa yalokho, gwema ukungenelela kokuhlinzwa (kufaka phakathi ukunqunywa kwezingalo ezithintekile).
Ehlukanisweni lwamazwe omhlaba lwezifo (mcb 10), ukuqeda kwe-atherosulinosis yemikhumbi yezindawo eziphansi kune-code I70.2.
I-Pathogenesis: izindlela zokuthuthuka
Ngokuqondene ne-pathogenesis yesifo, imibono yabachwepheshe ihlukile. Imvamisa imbangela eyinhloko yokwanda kwalesi sifo ukuphathwa kwe-lipid. Imbangela ukwakheka okwandayo kwama-low density lipoproteins (LDL).
Ngenxa yalokhu, ukucasuka kanye nokulimazeka okwengeziwe komzimba wangaphakathi odongeni lomkhumbi kwenzeka. E-foci ye-lesion, kufakwa amaseli amanoni, kufakwa i-atherosclerotic plaque futhi, ngenxa yalokho, kunciphisa izikhala emikhunjini.
KUBALULEKILE! Lapho kukhula i-atherossteotic plaque, izimpawu zezimpawu ze-arteriosulinosis obliterans kanye nengozi enkulu yezinkinga zokuphazamiseka.
Ukuze kube khona kwe-lipid esegazini ukukhipha isifo esibi kangako, izici eziningana kumele zihlanganiswe. Izici ezithinta ukwakheka kwezicubu zomzimba:
ubulili (imvamisa kakhulu owesilisa uhlushwa yilesi sifo),
iminyaka (ukubonakaliswa kokuqala kwe-pathology kuvela eminyakeni yobudala),
yokuphila kokuhlala phansi
ukusebenza njalo komzimba,
ukulimala, i-hypothermia noma i-frostbite yemikhawulo ephansi.
Izindlela Zokwelapha i-Atherossteosis
Indlela yokwelashwa yesifo esiwohlokayo ithuthukiswa ngawodaba ngalunye. Imvamisa, kanye nokwelashwa kwendabuko, kusetshenziswa izindlela ezingezona zendabuko zokwelapha. Ngokusebenzisa izidakamizwa, kusetshenziswa le mithi elandelayo:
ukuvimbela ukwakheka kwezihibe zegazi (reopoliglyukin noma i-aspirin),
kusebenze ukukhuthazela ngokomzimba (i-cilostazol),
kwehlisa i-cholesterol yegazi,
kuthuthukisa ukuhamba kwegazi,
ukugcotshwa kwama-antmicrobial (ngokubonakala kwezilonda ezindexekile),
ukuthuthukisa ukondleka kwezicubu (zincteralol),
i-vasodilator (trenalol, vasonitol),
i-nicotinic acid (uma kungekho okuphikisanayo),
ama-sequestrants of bile acid (ngezigaba zokuqala zesifo).
Izindlela zokwelapha zokwelapha ifomu eliqhekekile zibandakanya:
ukuhlinzwa okudlula lapho
ubuciko bendawo ethintekile,
Kanye nokwelashwa kwezidakamizwa, i-physiotherapy nayo ingasetshenziswa. Ochwepheshe batusa izinqubo ezilandelayo zomzimba:
ukwelashwa kokuphazanyiswa (umphumela kwizicubu ezithintekile ngokuqondile nangokushintshana kwamanje),
Kumele futhi kuqashelwe ukuthi ekwelashweni kwe-pathology ezinsukwini zokuqala nanjenge-prophylaxis, odokotela abakwenqabeli ukusetshenziswa kwemithi yendabuko.
Lapho ukunqunywa kudingekayo?
Ukubonakala kwamanxeba avulekile noma i-gangrene kuwuphawu lwe-occlusion yemithambo. Kulokhu, amathuba odokotela abahlinzayo mancane.
KUBALULEKILE! Ukuba khona kwezicubu ne-gangrene necrosis, kanye nokungabikhona kokubuyiselwa kwegazi ngokulingene, kuholela ekuqunjweni kwesitho, ngoba yile ndlela kuphela yokusindisa impilo yesiguli.
Kwesinye isikhathi ngemuva kokuhlinzwa, ezinye izinkinga kanye nemiphumela kungenzeka.
Uhlu lwezinkinga zemithambo ye-arteriosulinosis obliterans ::
isigatshana ngezikhathi ezithile, isiguli sidinga usizo ngokuhamba, kuze kube yiminyuziki,
ama-hematomas kumasayithi wokuhlawulisa athambile kakhulu futhi adinga ikhava ngaphansi kwezingubo,
I-thrombosis noma ukuqhekeka kwe-artery (le nkinga iyivelakancane),
calcification ubonakala fragility kwezicubu namathambo, futhi kubuhlungu kumuntu ukuhamba futhi, imvamisa, udinga usizo.
Ngokuphinde kubuyele lesi sifo, kunconywa ukuqhuba inkambo yesibili yokwelashwa, futhi uma kunesidingo, ngenze ezinye izinqubo zokwelashwa.
KUBALULEKILE! Ungakhohlwa ukuthi ukuphindwa kwezimpawu kungakhombisa ukuqhubeka kwalesi sifo.
Umehluko omkhulu kusuka ku-endarteritis ukuthi esimweni sokuqala, ukuncipha komkhumbi kwenzeka ngenxa yokufakwa kwamafutha ezindongeni zemikhumbi, kuthi okwesibili, umkhumbi ubambe ngenxa yokuvuvukala.
I-atherossteosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi (ukuqeda) - ikhodi ngokuya nge-ICD-10
Ingozi engapheliyo ye-cerebrovascular (CMS): yini? 1. Ukuhlinzekwa kwegazi ebuchosheni 2. Izimbangela zesifo 3. Izindlela zokukhula 4. Ukubonakaliswa kwemitholampilo 5. Ukuxilongwa 6. Ukwelashwa kwe-Cerebrovascular pathology kunesikhundla esiphambili kuzo zonke izifo ze-neurological.
Uma ubheka impilo yakho futhi ulalele imizwa, khona-ke ukubonakaliswa kwesifo kungaqashelwa ngisho nangokuzimela. Lesi sifo sinezimpawu ezilandelayo:
umuzwa wokumiswa, uvutha emilenzeni,
ukuzindla, izinyawo ezibandayo,
isikhumba esiphuzi semikhawulo engezansi,
i-atrophy yezicubu okhalweni nasezinyaweni (i-vasoconstriction iholela ekuphazamiseni izinqubo ze-metabolic ezicutshini, futhi lokhu kuholela ekunciphiseni ungqimba lomsipha namafutha),
ukulahleka okuphelele noma okuyingxenye kwezinwele emilenzeni ngenxa yokushibilika kwegazi,
Ubuhlungu nokukhala, okuhambisana nokukhala kobuhlungu.
QAPHELA! Ezigabeni zakamuva zalesi sifo, kubonwa ukuqothuka kwesikhumba sezinyawo neminwe. Lokhu kusikisela ukuthi imithambo incishisiwe kwaqala nokuqina kwegazi. Uma kulesi sigaba ungabizi uchwepheshe futhi ungathathi izinyathelo, khona-ke ngokuhamba kwesikhathi izilonda eziyinqaba ne-gangrene zizokwakha emilenzeni yakho.
Uma ochwepheshe benokusola kwalesi sifo, khona-ke inqubo yezindlela zokuxilonga iyenziwa. Izinyathelo zokutholwa kwe-atherosclerosis eseqisayo yilezi ezilandelayo:
i-multislice composed tomography,
i-magnetic resonance angiography,
ukuhlolwa kokudonsa kwemikhumbi yamaphethelo aphansi,
Ukuqapha umfutho wegazi wokubala inkomba ye-ankle-brachial,
ukubonisana nodokotela oyi-phlebologist,
Ukuxilongwa ngokuningiliziwe akugcini nje ngokwenza ukuthi kunqume isigaba sesifo, kodwa futhi kusiza ukuqeda izifo ezinezimpawu ezifanayo.
I-atherossteosis obliterans ingenye yezimpawu zokuqala zokuguga. Ikhula kubantu abaneminyaka engaphezu kuka-60. Uma, ngezibonakaliso zokuqala zesifo, umuntu engabonisi uchwepheshe futhi engaqali inkambo yokwelashwa, khona-ke imiphumela ingaba mibi kakhulu.
Ikhodi ye-ICD engu-10 ephansi ye-atherossteosis obliterans
I-Diphtheria kubantu abadala: izimbangela, izimpawu, ukuxilongwa, ukwelashwa nokuvimbela I-Diphtheria yisifo esithathelanayo esibi esibangelwa yi-bacterium Corynebacterium diphtheriae. Lesi sifo sinezimpawu ezinjalo ...
I-Periostitis, noma i-flux yamazinyo phakathi kwabantu, yisifo esihambisana nokuvuvukala, esilandela kusukela ekugcineni kwe "um", okuhlala kusho ukuthi, esigungwini sezokwelapha, ukuvuvukala kokuthile. Ku ...
I-Periodontitis yisifo esiholela ekuhlelweni kwe-periodontal pathology (kufika ku-93% yamacala). Lesi sifo sibangela ukuvuvukala hhayi izinsini kuphela, kodwa nezicubu ezizungeze amazinyo, a ...
Athonia (ukulahleka kwezwi). Izimbangela, izimpawu nokwelashwa kwe-aphonia Afonia (ukulahleka kwezwi) - isimo sokulahleka kobuzwe bezwi, - amandla okukhuluma ngokuhleba kuphela. Eqinisweni, i-aphonia ukungabikho ...
Izifo ezingamagciwane eziphefumula kakhulu, umkhuhlane ne-rhinitis (ikhala eligijimayo) zivame ukuhambisana nokuvuvukala kwama-sinus (ama-sinuses). Kukhona abaningana babo. Igama elijwayelekile lokuvuvukala kwabo libizwa ngokuthi yi-sinusitis. Kepha ukuvuvukala ...
I-Osteomyelitis - izimpawu, izimbangela, izinhlobo kanye nokwelashwa kwe-osteomyelitis Usuku oluhle, bafundi abathandekayo! Ku-athikili yanamuhla, sizobheka nawe isifo se-osteomyelitis ezinganeni nase ...
I-Kyphosis - izimpawu, izimbangela, izinhlobo, amadigri nokwelashwa kwe-kyphosis Usuku oluhle, bafundi abathandekayo! Ku-athikili yanamuhla, sizobheka nawe ngesifo somgogodla, njengokuthi ...
Ukushisa okuphezulu nokuphakama komzimba: 37, 38, 39, 40 ° С. Ukushisa komzimba kuyinkomba yesimo esishisayo somzimba womuntu, okubonisa isilinganiso phakathi kokukhiqizwa kokushisa kwezitho ezahlukahlukene ...
Izingane kungenzeka kakhulu kunabantu abadala ukuthola umkhuhlane. Leli qiniso liyaziwa ngabaningi. Izingane kungenzeka kakhulu kunabantu abadala ukuthola umkhuhlane. Leli qiniso liyaziwa ngabaningi. Ngokuqala kwamakhaza ...
I-Sphenoiditis. Izimpawu, izimbangela, izinhlobo kanye nokwelashwa kwe-sphenoiditis Usuku oluhle, bafundi abathandekayo! Ku-athikili yanamuhla, sizocubungula nawe isifo esinjengalesi - sphenoiditis. I-Sphenoiditis ...
Ukubambeka emilenzeni. Ubuhlungu obuphansi emuva. Ukukhathala. Ukuqothuka komgogodla. Izinga elihlukile lamahlombe. Ukwephulwa kwemikhono yesikhumba. Skew of the pelvis. Torso kwelinye icala ...
Kulesi sihloko sizobheka izinhlobo ze-colitis nezimpawu zazo ezijwayelekile. I-Colon irritable bowel syndrome (i-spastic colitis, i-SRKT) ibonakaliswa ngokuqhakaza, ukuminyanisa kanye nokungasebenzi kahle ...
Sanibonani, bafundi abathandekayo! Kulesi sihloko sizocubungula imibuzo emi-2: - okufanele ukwenze uma umuntu ewele ngaphansi kweqhwa?, - usizo lokuqala lokwehluleka ...
I-endocarditis yesifo yathola igama layo igama elithi "endocardium". I-endocardium ungqimba lwangaphakathi wenhliziyo, oluhlanganisa izicubu ze-endothelial ne-subendothelial, udonga lwe-atrial, izicubu ezibushelelezi ...
Ubuthi obunobuthi: izimpawu, usizo lokuqala, ukwelashwa Usuku oluhle, bafundi abathandekayo! Ngicabanga ukuthi uma uqala ukufunda le ndatshana, mhlawumbe isikhathi sosuku kanye ...
I-Neuritis yisifo sokuvuvukala semithambo ye-peripheral eholela ekuguqukeni kwesakhiwo kwezicubu zemizwa. Ibonakala njenge-pain syndrome, ukwehla kanye nokulahleka kokuzwela, i-paresis nokukhubazeka komzimba. I-Neuritis ...
Ubuthi bokudla kungukugaya ukudla okudala okubangelwa ukumunca kwama-microorganisms we-pathogenic (amagciwane, ama-parasites, njll.) Kanye nokudla noma iziphuzo. Ukusabela komzimba ku ...
Imiphumela eyingozi kakhulu ye-borreliosis yizingqinamba ezivela ekulimeni okukhaza. Uhlobo olubi lwe-borreliosis, oluqhubeka ngesimo se-erythema esikhumbeni, lunenkambo emnene kanye nokwelashwa okungamaphesenti angama-90, ...
I-Enteritis yisifo sokuvuvukala samathumbu amancane. Kwezinye izimo, i-enteritis ingahlanganiswa ne-gastritis (gastroenteritis) kanye / noma ithinte i-colon (enterocolitis). I-Enteritis ingenzeka ngo ...
Allergy Izimpawu eziphambili zokungezwani komzimba nendlu nezindlela zokuvimbela kwazo Izimpawu zokungezwani komzimba ekhaleni eligobhozayo, ukuqubuka kwesikhumba, ukuhlaselwa isifuba somoya kanye ne-conjunctivitis, ukuphazamiseka kokujikeleza ...
I-dermatitis yisifo esivuvukisayo sesikhumba esenzeka ngenxa yokuchayeka ezicini ezihlukile zangaphakathi noma zangaphandle zomsuka womzimba, wamakhemikhali noma webhayoloji. Ngezinto ezinjalo ...
Isifuba Somoya (Brashchial asthma): izimpawu zokuqala nezimpawu, izimbangela kanye nokwelashwa Isifuba somoya yisifo esingalapheki, isisekelo salokhu kugula kungukutheleleka okungatheleleki ezindleleni zomoya. Ukuthuthukiswa kwesifo somoya (asthma)…
Isikhathi esifudumele asiphelele ngaphandle komiyane. Uma eduzane kukhona imifula, amachibi, amachibi namahlathi, khona-ke isibalo sawo egazi siyanda. Ukulunywa umiyane imvamisa akuyona neze ...
. noma: Ukukhubazeka komgogodla womgogodla, ukukhubazeka komgogodla, isifo se-Heine-Medina Isimo sokungalingani: izimpawu zokuphuza umzimba (izimpawu zokuthi ubuthi bomzimba ngama-pathogen ubuthi) - izinga lokushisa lomzimba eliphansi 37,5 - ...
Isifo i-atherossteotic esiyinkimbinkimbi nge-occlusion singadala i-thromboembolism, izilonda ze-trophic kanye ne-gangrene.Ukuxilongwa kwanoma yiziphi zalezi zinkinga kudinga ulwazi lokufakwa amakhodi kwezimo ezikhonjiswe ku-ICD 10. Isifo sokuqina kwemikhawulo yamaphethelo aphansi ku-International Classization of Diseases 10 ukubuyekeza kusigaba I70 - I79.
Imvamisa, ikhodi yesifo esithile yaziwa kakhulu kodokotela abasebenza ekwelashweni kwe-vascular pathology.
Kodwa-ke, izinkinga zohlelo lokujikeleza kwezempilo olwethulwe ku-ICD 10 zingahlangatshezwa nodokotela bazo zonke izinto ezikhethekile, ngakho-ke, imininingwane ngezimo ezithile ezivela ezifweni ze-vascular kufanele ilinganiswe.
Ukuqhekeka kweziqu zemithi evele lapho emzimbeni kungabonakala ngezimpawu ezahlukahlukene. Ukwazi ikhodi yokuxilongwa kuzokusiza uzulazule ngokushesha inani elikhulu lezifo zemithambo yegazi.
Iqembu lezifo elihambisana nezilonda ze-atherosulinotic
Zonke izifo ezenzeka ngokumelene nesizinda senkambo engenzima noma eyinkimbinkimbi ye-atherosclerosis ihlelwe ngaphansi kwekhodi I70 futhi ifaka izinketho ezilandelayo ze-pathology:
isifo se-atherosclerotic aortic (I70.0),
ukulimala kwemithambo ye-renal (I70.1),
isifo sokuqina kwemithambo yemithambo yemikhawulo ephansi (I70.2),
ukuncishiswa kwanoma imiphi eminye imithambo ebangelwa yi-pathological atherogenesis (I70.8),
inqubo ehlukahlukene noma engacacisiwe ye-pathological eyenzeka ngokumelene nesizinda se-atherosulinosis (I70.9).
Udokotela angasebenzisa noma iyiphi ikhodi evela ku-ICD 10 ukukhombisa ukutholakala kwe-vascular pathology. Kuyadingeka ukuhlukanisa i-atherosulinosis yemikhawulo ephansi ibe izingxenye 2 - inguqulo eyinkimbinkimbi noma elula. Ukwehlukanisa i-atherosulinosis yemikhumbi kufakwa ikhodi I70.2.
Izinkinga zemithambo yemilenze, ihlelwe ku-International Classization
Okubaluleke kakhulu ekuqinisekiseni ukugeleza kwegazi emilenzeni yisifo se-aorta noma imithambo emikhulu yemithambo.
Ikakhulu, uma i-plaque ye-atherosclerotic iholele ekuphazamisekeni kwegazi, ukwanda kohlobo lwe-aneurysm yeseli kuzokwakheka ngaphezu kokuncipha.
Uma i-atherosclerosis ikhuthaza ukwakheka kokunwetshwa kwe-aneurysmal ku-aorta noma emikhunjini engaphansi, udokotela uzosetha le khodi elandelayo kusuka ekuhlukweni kwe-10 yokubuyekezwa:
i-aneurysm yesisu nge-kapaurupmure noma ngaphandle kokuqhuma (I71.3-I71.4),
ukunwetshwa kwemithambo ye-iliac (I72.3),
i-aneurysm yemithambo yemikhawulo ephansi (I72.4),
Ukunwetshwa kwe-aneurysmal kwendawo okwenziwa kabusha noma okuchaziwe (I72.8 -I72.9).
Eqenjini le-peripheral vasology pathology, i-International Classization of Revision 10 igcizelela izinketho ezilandelayo ze-pathology:
i-vascular spasm of artery encane noma iRaynaud's syndrome (I73.0),
i-thromboangiitis obliterans, ehlanganisa ukuvuvukala kanye ne-thrombosis (I73.1),
Isifo se-vasipic esibekiwe noma esingacaciswanga (I73.8-I73.9).
Uma i-atherosulinosis esifundeni semithambo yemilenze ibangela ubunzima be-thrombotic, khona-ke lezi zinhlobo zezinkinga zihlelwe kumakhodi alandelayo:
i-abdominal aortic thromboembolism (I74.0),
i-thrombosis yemithambo yemikhawulo engezansi (I74.3),
Ukuvinjwa kwemithambo ye-iliac yi-thrombi noma i-emboli (I74.5).
Ukwehlukanisa okwehlukanisayo kokuqina kwemithambo kufakwa ngekhodi. Uma kwenzeka kube nezinkinga ezinkulu (i-gangren, trophic ulcers), i-ICD 10 khodi ihambelana nekhodi ejwayelekile, kanye nesifo sokuqina kwemithambo yethambo nomlenze ophansi (I70.2).
Wonke udokotela kufanele azi futhi asebenzise amakhodi we-International Classization of Diseases. Endabeni ye-pathology yemikhumbi yemilenze, kubalulekile ukuqonda ukuthi ngaphansi kwekhodi efanayo kungahle kube nezinketho ezihlukile - i-atherosclerosis noma i-atherosclerosis engenakuphikwa yamaphethelo aphansi.
Ngokuya kokutholwa kokuqala, udokotela uzosebenzisa izindlela zokuthola ulwazi ezifanele nezinolwazi zokuqinisekisa ukuhlukahluka kwalesi sifo futhi akhethe uhlobo lokwelashwa olungcono kakhulu. Ukuba khona kwezinkinga kubaluleke kakhulu: uma udokotela ebona izilonda ezibucayi, khona-ke ukwelashwa kufanele kuqale ngokushesha.
Kodwa-ke, kuzo zonke izimo, ukuvimbela kuzonikeza umphumela omuhle kakhulu, ngakho-ke kufanele ulandele izincomo zikadokotela esibonelweni sezimpawu ezincane ze-atherosulinotic, ngaphandle kokulinda ukuvela kwe-ulceration esikhunjeni noma ezilwaneni ezihlukumezanayo zemilenze.
Ukunqunywa kokuqhekeka kwe-atherosulinosis yemikhumbi yamaphethelo aphansi e-ICD 10
Ngokusho kwezigaba zomhlaba wonke kwezifo (ikhodi engu-170, ngokwe-ICD 10), i-atherosulinosis obliterans yemithambo engemuva ephansi iyindlela yokuthola imithambo yemikhawulo engezansi, ebonakala ngokuqongelela okukhulu kwe-cholesterol ne-lipid ezindongeni zemithambo.
Lamaqembu okuqongelela abizwa ngokuthi ama-atherosclerotic plaque, angakhula futhi abangele i-stenosis, noma angakwazi ukuvimba ngokuphelele imikhumbi, enze umonakalo omkhulu emikhawulweni ephansi.
Ngaphezu kwalokho mayelana nezimbangela, ukuxilongwa kanye nokwelashwa kwe-atherosulinosis obliterans of the shipping exterior (code 170 ngokusho kwe-ICD 10), imininingwane izoba wusizo kubo bonke abakhathalela impilo yabo.
Ukwehlukanisa i-atherosulinosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi kuyindlela evamile kakhulu yemithambo yegazi. Ngokusho kwedatha ejwayelekile, ngalolu hlobo lwe-pathology, izilonda ze-occlusal-stenotic zitholakala ku-20% yeziguli.
Iqembu lengozi lifaka abantu abadala. I-Pathology itholakala kubantu abayi-8% abaneminyaka yabo engaphezu kweminyaka engama-55. Kodwa-ke, abantu abasuka eminyakeni engama-45 kuye kwengama-55 ubudala bahlaselwa yilesi sifo ngamaphesenti amane. Abamele ingxenye yengxenye eqinile yesintu bavame ukuhlushwa yi-pathology.
Kwabesifazane, lesi sifo sitholakala kaningi.
Kuyaqapheleka ukuthi abantu abanemikhuba emibi, ikakhulukazi, ababhemayo kakhulu, bavame ukugula. Kungaba nezizathu eziningana zokukhula kwesimo se-pathological.
Isizathu esiyinhloko ukungasebenzi kahle kwe-lipid metabolism, ngamanye amagama, izinga eliphakeme le-cholesterol egazini. Kodwa odokotela bathi ukuqongelela i-cholesterol kuphela akwenele ekuthuthukisweni kwesifo ngokushesha.
Kufakazelwe ukuthi izici ezithile zobungozi kumele zibekhona, futhi zingaba ngokulandelayo:
iqembu elisukela eminyakeni engama-45,
ubulili, iningi labesilisa
ukuba khona kwe-pathologies, ngokwesibonelo, isifo sikashukela noma umfutho wegazi ophezulu,
ukudla okungenampilo, ukudla amafutha amaningi ezilwane,
okukhulu, ukucindezela ngokweqile kwengqondo nokuzivocavoca,
Ukupholisa kanzima kwemilenze, i-frostbite,
Namuhla, ososayensi bafaka isakhi sofuzo sokuzibeka engcupheni yokuqalwa kwale ndlela yokusebenza. Kufakazelwa ukuthi kwezinye izimo yifa elingathinta isifiso sokukhulisa amazinga e-cholesterol.
Ukuthi isibonakaliso sesifo sizoba yini ngqo kuya ngokuthi i-pathology iqhubeka kanjani futhi kusigaba sayo. Isigaba sinqunywa sobabili ngokuthi i-artery ivimbe kangakanani nokuthi kunzima kangakanani isifo ngenxa yokuvela kokuphazamiseka kokujikeleza emaphethelweni aphansi. Namuhla kwezokwelapha, izigaba ezi-4 zokuqothula i-atherosclerosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi zihlukanisiwe futhi zichazwe:
1. Ngiya esiteji. Izimpawu ezikulesi sigaba azenzeki. Ukuxilongwa kwe-pathology kungenzeka kuphela ngokudlulisela i-biochemistry, imiphumela yakho izoveza izinga eliphezulu le-cholesterol egazini.
2. Isigaba II. Kulesi sigaba, umuntu angazizwa izimpawu zokuqala, ezivezwa ngesimo semilenze eyisimungulu, ukuqina kwemisipha emilenzeni kanye ne-pain pain encane.
3. Isigaba se-III. Umtholampilo okulesi sigaba kuthiwa. Umuntu uzwa izinhlungu ezinzima, kukhona i-lameness. Esikhunjeni, ungabuka izilonda namanxeba amancane.
4. IV isigaba. Kubonakala ngezimpawu ezinzima. Ukuqunjelwa kwemisipha kwenzeka, umuntu uhlala ezwa izinhlungu, i-lameness iba yisifo esingapheliyo, ukukhula komzimba, okuholela ekunqunyweni kwelungu.
Lapho wenza izimpawu zokuqala ze-pathology, kubaluleke kakhulu ukuxhumana nodokotela ozilolayo.
Udokotela kuphela ozokwazi ukuhlola izinga lomonakalo, athumele umuntu ukuthi ahlolwe, abeke ukuxilongwa okufanele emiphumeleni futhi anikeze ukwelashwa okusebenzayo.
I-pathology itholakala ngemiphumela ye-anamnesis, eqoqwa ngudokotela oya khona.Ukuxilongwa kusekelwe kwizimpawu zomtholampilo kanye nelabhorethri, izifundo ezinamandla.
Ukusuka ekuhlolweni kwelabhoratri, iminikelo yegazi kanye nomchamo imvamisa ibekiwe, futhi kusuka ekuhlolweni okuthile kwezokwelapha, i-rheovasography, i-Dopplerography, i-thermometry, i-arteriography kuyenziwa, amasampula anomthwalo wokusebenza uthathwa.
Ngemuva kokuthi ukuhlolwa okugcwele kwenziwe, udokotela ubeka inkambo ethile yokwelashwa kwe-pathology. Uhlobo lokwelashwa luhlanganiswa kucatshangelwa isigaba sesifo kanye nenkambo ye-pathology. Ukuba khona kwezinkinga kuthinta ukwakheka kwerejimeni yokwelashwa. I-Therapy ingaba i-Conservative, endovascular noma ukuhlinzwa. Ukwelapha kungahle kube nezindlela zokuphila kahle, okufana:
ukulungisa umsoco, ukunciphisa ukudliwa kokudla ne-cholesterol,
ukwelashwa kwe-pathologies eyandisa ukwelashwa kwe-atherossteosis,
ukuvikelwa kwemilenze ekulimaleni nase hypothermia.
Ukwelashwa okuqaphelekayo kufaka phakathi ukwelashwa okugcotshwe ngamafutha asuselwa kuma-antibhiliya, i-physiotherapy, umuthi, ama-vasodilators, ama-vitamini complexes, umuthi odambisa i-spasm kanye nezidakamizwa ezibuyisa umsoco ezicutshini zamaphethelo aphansi.
Izindlela ze-endovascular zibandakanya i-angioplasty, i-balloon dilatation kanye ne-arterial stenting. Lolu hlobo lokwelashwa lubhekwa njengolusebenza kakhulu, oluhamba phambili ngokubuyisela ukugeleza kwegazi ohlelweni lwe-vascular.
Ukwelapha ngokuhlinzwa kusetshenziswa kuphela lapho ezinye izindlela zinganikanga umphumela omuhle wokwelapha. Ukuhlinzwa kusetshenziselwa izinkinga, ezinjenge-prosthetics, ukuhlinzwa kwe-bypass, noma i-thrombendarterectomy.
Uma i-pathology iholela ebhungeni, izicubu ze-necrosis, khona-ke ukususwa okuyingxenye kwezindawo ezithintekile kungenziwa. Ukukhubazeka ngenxa yokuqunjelwa imilenze ephansi kwenziwa - lokhu imbangela ye-atherosclerosis eqhubekayo.
Njengokwelashwa okuyinkimbinkimbi, ngemvume kadokotela, ungasebenzisa izindlela zokupheka ezivela kubantu, amakhambi anikezwa omunye umuthi. Izindlela zokupheka ezidumile kakhulu yilezi:
1. Ukuze uqede inqubo yokuvuvukala, kuyadingeka ukuphuza ama-broths ama-hawthorn, i-clover, izimpande kanye ne-clover. Umhluzi wenziwe elula. Kuyadingeka ukuthatha i-1 tbsp. l hlanganisa esinye sezitshalo zokwelapha ngengilazi yamanzi bese uletha kumathumba. Bilisa amasekhondi angama-60 futhi, ususe esitofu, ugcizelele ngaphansi kwesivalo esivaliwe imizuzu engama-20. Kufanele kuthathwe ngemuva kokuba umkhiqizo ungcolile, ingxenye yesithathu yengilazi amahlandla ama-3 ngosuku ngaphambi kokudla. Izinyathelo kumele zithathwe ngokulandelana.
2. Izicelo ezisuselwa ku-sage, i-wort yase-St John, i-chamomile, i-plantain kanye nokulandelana. Amakhambi kumele ahlanganiswe ngezingxenye ezilinganayo. Ngemuva kwalokho kufanele uthathe isipuni sokuqoqa bese uthele ingilazi yamanzi abilayo, ugcizelele isikhathi eside. Ngaphambi kokufaka i-applique, unyawo kufanele lugezwe ngensipho yokuhlanza emnyama kanye nengxube efudunyezwe ku-37 ° C. Okulandelayo, gcoba i-gauze ekwakhiweni bese usebenzisa izingqimba emilenzeni, hhayi ngaphezulu kwezendlalelo ezi-4. Isikhathi sokusebenza kuncike ekujuleni kwesifundo salesi sifo.
3. Ekwelapheni i-atherosclerosis, kubalulekile ukugcina isibindi esinempilo. Kunconywa i-lotion ebandayo endaweni yesibindi ekuseni nakusihlwa. Umuthi omuhle wokulungisa isibindi yi-thistle yobisi ne-dieelle. Lezi zimali zingathengwa kunoma iyiphi ikhemisi lekhemisi futhi zithathwe ngokwemiyalo.
Kubalulekile ukuqonda ukuthi isisekelo sanoma yikuphi ukwelashwa ukwelashwa kwezokwelapha kwendabuko, zonke ezinye izindlela kufanele zihambisane nodokotela oholayo, ngoba ukwelashwa okuzimele kungadala izingqinamba ezinkulu ezizoholela ekunqunyweni kwezitho noma ngisho nokufa kwesiguli.
Ukwehlukanisa i-atherosclerosis yemikhumbi yamaphethelo aphansi mcb 10 khodi
Ukwehlukanisa i-atherosulinosis yemikhumbi yamaphethelo aphansi (ikhodi amagciwane ayi-10): ukwelashwa nokuvimbela
Uma kukhona ukwephulwa kokugeleza kwegazi emithanjeni yemilenze, kuhambisana nokuncipha kokhakhayi lwawo kanye nokuntuleka okuyingxenye kokuqina kwemithambo ezingxenyeni zezinsikazi nezabantu abaningi, ukuqeda i-atherosulinosis yemithambo yemikhawulo engezansi kutholakala kunekhodi ye-ICD ka-10: 170.2.
Ukuvalwa kwe-lumen yemithambo yegazi kwenzeka njengempendulo ekuqongeleleni kwenombolo enkulu yezakhiwo ze-lipid ne-cholesterol. Lezi zingcweti, ekuqaleni ezincane, kancane kancane zikhula ngosayizi futhi zikhula ku-lumen of the artery. I-Arterial stenosis iyenzeka, bese ivalwa ngokuphelele.
I-ICD 10 ihlukanisa i-atherosclerosis yemithambo yemilenze ephansi njenge-pathology ehlotshaniswa nokwanda ngokweqile kwe-cholesterol ezindongeni zemithambo yegazi. Lesi sifo sivame kakhulu ku-20% weziguli esezikhulile ezine-atherosclerosis.
Kepha kuyaphawuleka ukuthi kubantu beminyaka yangaphambi kokuthatha umhlalaphansi, isibalo samacala atholakele kwe-atherosulinosis asemaphethelweni aphansi asondela ku-4%, kuthi ngemuva kweminyaka eyi-10 - kabili kaningi.
Ukuze i-cholesterol ethe xaxa egazini ibangele isifo esibucayi njenge-atherosulinosis yemithambo yemikhawulo engezansi, kufakwe ekuhlukweni kwamazwe aphesheya kwe-ICD 10, ukuhlanganiswa kwezinto eziningana ezithinta ukwakheka kwemithambo yegazi kufanele kube:
Izimvo zokuhlonza kuqala (kubantu abanezihlobo ezine-atherosclerosis, kukhona uhlobo oluvamile olucasulayo lesi sifo),
I-Subcooling ne-frostbite yemilenze,
Umlando wokulimala emlenzeni.
Isigaba nezimpawu zesifo
Ubunzima bezimpawu nobunjalo bazo buxhomeke kubungako bokuthuthuka kanye nokuthuthuka kwe-atherosulinosis yamaphethelo aphansi (i-ICD khodi 10), ukubandakanyeka kwinqubo yemithambo yemilenze nokugqagqana kwe-lumen yabo.
Kunezigaba ezi-4 ezihlukaniswe ukubonakaliswa komtholampilo:
Isigaba sokuqala - ukuxilongwa kusungulwa kuphela yimiphumela yokuhlolwa kwelebhu yokwakheka kwegazi, kuthola i-cholesterol ethe xaxa. Akukho okubonakaliswa kwesifo esibonwa yisiguli.
Isigaba sesibili sivelelwa ukuba khona kwezibonakaliso zokuqala zesifo ezibonakalayo, kufaka phakathi ukuzwela, ukuqaqamba emaphethelweni aphansi, ukuvela kwemisipha kanye nokubandza (okuchazwa wukuwohloka kokuhlinzekelwa kwegazi kulezi zingxenye zomzimba).
Esigabeni sesithathu, kubonakaliswa izimpawu zomtholampilo ngokusobala: ukuncipha kwesikhumba emilenzeni, ukukhululeka kokulimala kwesikhumba nokubonakala kwamanxeba, ukuqina kanye nobuhlungu obukhulu emaphethelweni aphansi kuyavela.
Isigaba sesine yisimo esibi. Esigulini, i-lameness iba njalo, ubuhlungu obuphikelelayo buyaqhubeka, ukuqina kwemisipha yomlenze. Cishe ukuthuthukiswa kwezilonda ezinde kanye ne-gangrene, okungaba nemiphumela ebulalayo kuze kufike ekulahlekelweni yilunga.
Lapho ukhomba izimpawu ezichaziwe, uma kunezimo ezethusayo, kuyadingeka ukubonana nodokotela masinyane ngangokunokwenzeka ukuze kuhlolwe, kutholakale isifo kanye nokwelashwa.I-atherosclerosis yesobunxele engagadiwe yemikhumbi yemikhawulo engezansi (ikhodi ye-ICD 10) iholela ekukhubazekeni.
Izimbangela kanye nokwelashwa ukwelashwa kwe-atherosclerosis eqothula imithambo yemikhawulo ephansi
I-Atherossteosis yisifo esingamahlalakhona lapho i-atherosulinotic plaque ngokwengxenye noma isimboza ngokuphelele isiciko sayo sakhiwe ebusweni bangaphakathi bemithambo yegazi. Ukwehlukanisa i-atherosclerosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi kukhula ngokubhema, abantu abanesifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme, kanye nokukhulupha ngokweqile.
I-Atherossteosis iba kancane kancane. Imbangela eyinhloko kungaba yindlalifa, imikhuba emibi (ukubhema, utshwala), impilo yokuhlala phansi, ukungondleki kahle, ukucindezela.
Izici eziyingozi ezinkulu:
iminyaka: amadoda angaphezu kweminyaka engama-45 ubudala, abesifazane baneminyaka engaphezu kwengu-50,
ubulili obuqine kakhulu buhlushwa i-atherossteosis izikhathi ezi-1.5 kuya kwezingu-1,3,
Izifo ezihlangana nazo: umfutho wegazi ophakeme, isifo sikashukela, ukwehluleka kwe-thyroid,
Ukuwohloka noma ukuvaleka kwemithambo kuphazamisa ukuhamba kwejwayelekile kwemilenze. Izicubu zomlenze zishoda komoya-mpilo, izakhi zomzimba, ukubukeka kwegazi kuyanda, futhi nengozi yokuqhekeka kwegazi iyanda.
Ukushoda komoya-mpilo kanye nezakhi zomzimba kuvusa ukuvuvukala. Ukuqhubeka kokuqhekeka kwe-atherosclerosis kuholela ekuguqukeni, ekuwohlokeni kweseli. Umzimba ubheka izicubu ezinephutha njengokuthile okuhlukile - inqubo ye-autoimmune yendawo iba. Amaseli avikelekile ahlasela izakhi eziguquliwe, abangele ukufa kwawo Ngokomtholampilo, lokhu kuboniswa izilonda, izicubu ze-necrosis.
Akuzenzekeli ukuthi ama-deposits ahlala akhiwa kakhulu ezindaweni ezinamagatsha emithambo yegazi. Lapho ukugeleza kwegazi kuhlukanisiwe, kwakheka ama-vortices alimaza ungqimba lwangaphakathi lomthambo oludakayo. Ukugeleza kwegazi kulezi zindawo kuncishisiwe, okusiza sedimentation.
Ngokuya ngezinga lokulimala kwemithambo, ukuphazamiseka kokugeleza kwegazi, izigaba ezi-5 zesifo i-atherosulinosis ziyahlukaniswa.
Okwakudala. Ukuthuthukiswa kwe-atherosclerosis kuqala ngomonakalo esitsheni. Ingaphakathi layo liyayeka ukuba bushelelezi, izakhi zegazi zinamathela kalula kulo: i-lipoprotein ephansi kakhulu, imicu yokuhlobana namaseli wegazi. Ibala elinamafutha noma imicu ebunjiwe ngaphezulu komthambo, ongahambisani nokukhanya komkhumbi. Lesi yisigaba se-asymptomatic.
Isinxephezelo. Izingxenye ezintsha ze-lipoproteins, imicu, amaseli egazi aqala ukunamathela ku-plaque eyinhloko. Isimo sikhula, sihlangane nabasondelene, amafomu wokukhishwa ku-lumen we-artery. Izimpawu zokuqala zokuqothuka kwe-atherosulinosis ziyavela.
Ukukhokhelwa. I-plaque iba nkulu. Izicubu zomlenze azinawo umoya-mpilo. Umzimba uphelelwa amathuba okuncenga ngenxa yokuthi isimo somuntu siba sibi kakhulu.
Ukubuyiselwa. Izandla ezithintekile azitholi ingxenye ebalulekile ye-oxygen. Amaseli aba sengozini yomunye umonakalo. Ukulimala okukhanyayo, ukusikwa kwezipikili kuholela ekubukekeni kwemiluka nezilonda ezingapholiyo.
Izinguquko ezonakalisayo. Izicubu zamaphethelo aphansi kakhulu ziyafa, kuvela ubugwele.
Izimpawu zesifo zincike ekunganakwa kwayo, kanye nasekhaya le-plaque. Uma ukwakheka kwakheka ngaphakathi kwemithambo yothanga noma esifundeni esikhulu, kuvela “i-limp ephansi”. Ubuhlungu bakhe ematholeni buyimpawu.
Lapho isisu se-aorta noma i-artery ye -acac ilimele, i-lameness ibizwa ngokuthi "ephezulu." Kubonakaliswa ngobuhlungu emisipha yezinyawo, okhalweni, nasehlangothini lwe-hip. I-atrophy yemisipha yemilenze, uhhafu wamadoda uhlakulela ukungabi namandla.
Izimpawu zokuqala zesigaba
Ngendlela emnene ye-atherossteosis, abantu bakhala ngokukhathala okusheshayo, ubusika, imisipha, ukudinwa, ukushiswa kwamathiphu weminwe, ukuncipha kokuzwela kwemilenze. Umuntu onqabile uzobona udokotela onezimpawu ezinjengalezi, okuyihawu. Okwamanje, azikho izinguquko ezingenakulungiswa.Ngakho-ke, ukwelashwa kuzoba ngempumelelo ikakhulukazi.
Uma isiguli esinjalo sicelwa ukuba sihlolwe imashi, khona-ke ngemuva kwamamitha angama-500-1000 wokuhamba ngokushesha (izinyathelo ezi-2 / sec), siyoqala ukukhubazeka. Ukuqedela isifundo, umuntu uzocelwa ukuba ahambe kuze kube kuvela izinhlungu emsipha wethole, kanye nokuhluleka ngokuphelele ukuqhubeka. Zombili izinkomba ezisetshenziswa udokotela ukuhlonza, ukunquma ukusebenza kahle kokwelashwa.
Izimpawu zesigaba sesibili
Ngokuqothuka kwe-atherosclerosis, isikhumba sezinyawo, imilenze ephansi yomile, i-inelastic, iqale ukuphuma. Izithende zimbozwe isikhumba esibi esijwayele ukugcwala.
Ukukhula kwesikhonkwane kwehlisa ijubane, futhi izipikili ngokwazo azibukeki ziphilile (ziyathambile, ziba buthuntu, ziyisiququ). Izinwele zomlenze onenkinga ziqala ukuphuma, iziqaqa zefomu lokuqina.
Umuntu ongelona izinyonga angahamba kuphela ama-200-250 m (isigaba 2a) noma kancane (isigaba 2b).
Izimpawu zesigaba sesithathu
Imilenze ilimala ngisho noma umuntu anganyakazi. Isikhumba sinciphile. Ukulimala okuncane (ukusikwa kwezipikili, ukusikeka, ukulimala okuncane) kuholela ekwakhekeni kwezilonda ezijulile ezingashisi, imifantu.
Umbala wesikhumba uncike esimweni somlenze. Umlenze ophakanyisiwe ubukeka uphaphathekile, wehliselwe phansi - wabomvu. Umuntu angajikisa kuphela efulethini.
Ngisho nokuhamba iDemo (25-50 m) kuhambisana nokudabuka, izinhlungu ezinzima.
I-sea buckthorn kulolo hlobo lwesifo sikashukela mellitus 1 no-2, izakhiwo zokupholisa ze-sea sihlahla sivame ukutholakala kushukela
Amakhekhe e-Chocolate Gingerbread
Jam ngaphandle ushukela - zokupheka
I-arteryosulinosis eqhubekayo yenhliziyo
Hlobo luni lwesinkwa engingasidla nge-pancreatitis?
Unyaka ngaphandle koshukela: okuhlangenwe nakho komuntu
Yimuphi udokotela okufanele ngithinte uma ngisola isifo sikashukela
Yimuphi udokotela oxhumana naye uma usola isifo sikashukela Ezimweni eziningi, izimpawu zokuqala zesifo sikashukela esigulini ziqashelwa udokotela ngesikhathi sokuhlolwa okujwayelekile noma ngemuva kokuhlolwa kweglucose yegazi. ...
Ungasisebenzisa kanjani isidakamizwa i-Rosinsulin M?
Akuvunyelwe nje, kepha kunconywe kakhulu - uwoyela wezinhlanzi onesifo sikashukela
Isifo Sikashukela Acidosis
AmanyikweAma-sweetenersIsifo sikashukela kubantu besifazaneIzizathuUkuxilongaIzindlelaI-Dummy DiabetesicsUkwelashwa nokuvimbelaUkuhlaziyaIzifo Zesifo Sikashukela
Amakhiwane: uzuzisa noma ulimaze?
Ukubalwa kwamayunithi esinkwa ngokuya ngamatafula
Ukunakekelwa okuphuthumayo kwe-hyperglycemic coma
Izinhlobo zesifo sikashukela emakati nasezindlela zokwelashwa
Isifo sikashukela sokukhulelwa noma sokuthinta umzimba ngesikhathi sokukhulelwa
Izinhlobo Nezinhlobo, 2018